လူငယ်အင်တာနက်အသုံးပြုသူများ (၂၀၀၇) - Your Brain On Porn တွင်အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကိုမလိုလားအပ်သောနှင့်လိုချင်သောထိတွေ့မှု
မှတ်ချက်များ။ ။ ဒေတာကို ၂၀၀၅ ခုနှစ်မှရရှိသည်။ ၎င်းသည်အမည်ဝှက်ခြင်းထက်တယ်လီဖုန်းဖြင့်အင်တာဗျူးများမှတဆင့်ကောက်ယူခြင်းဖြစ်သည်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုလိင်တူချစ်သူများနှင့်ဖုန်းပြောသည့်အခါသူစိမ်းတစ် ဦး နှင့်စကားပြောသောအခါမည်မျှရိုးသားပြီးပွင့်လင်းမြင်သာမည်ကိုကျွန်ုပ်မေးခွန်းထုတ်သည်။
ကလေးအထူးကု။ 2007 Feb;119(2):247-57.
Wolak J ကို, Mitchell ကငွေကျပ်, Finkelhor: D.
ကလေးများသုတေသနစင်တာက New Hampshire ပြည်နယ်၏တက္ကသိုလ်ဆန့်ကျင်ပြစ်မှု, 10 အနောက် Edge ဒေါက်တာ, Durham, နယူးဟမ်းရှား 03824, USA ။ [အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်]
1500 လူငယ်တစ်ဦးတစ်နိုင်ငံလုံးကိုယ်စားလှယ်နမူနာများ၏တယ်လီဖုန်းစစ်တမ်း 10 နှစ် 17 အသက်အင်တာနက်အသုံးပြုသူမတ်လနှင့်ဇွန်လ 2005 အကြားကောက်ယူခဲ့သည်။
လူငယ်အင်တာနက်အသုံးပြုသူများ၏လေးဆယ်နှစ်ရာခိုင်နှုန်းကအတိတ်တစ်နှစ်တွင်အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းထိတွေ့ခဲ့သညျ။ သူတို့၏အမျိုးအ, 66% သာမလိုချင်တဲ့ထိတွေ့မှုကဖော်ပြခဲ့သည်။ Multinomial ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးဆုတ်ယုတ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းသာမလိုလားအပ်သောထိတွေ့မှုနှင့်ထိတွေ့မှုမရှိသောသူများနှင့်မလိုချင်သောထိတွေ့မှုနှင့်လူငယ်ကိုနှိုင်းယှဉ်ခဲ့သည်။ မလိုလားအပ်သောထိတွေ့မှုသည်ရုပ်ပုံများကို download ပြုလုပ်ရန်ဖိုင်မျှဝေသည့်ပရိုဂရမ်များကိုအသုံးပြုခြင်း - အင်တာနက်လှုပ်ရှားမှု ၁ ခုနှင့်သာသက်ဆိုင်သည်။ ဆော့ဝဲလ်စစ်ခြင်းနှင့်ပိတ်ဆို့ခြင်းသည်ဥပဒေစိုးမိုးရေး ၀ န်ထမ်းများ၏အင်တာနက်လုံခြုံရေးတင်ဆက်မှုကိုတက်ရောက်သကဲ့သို့မလိုလားအပ်သောထိတွေ့မှုအန္တရာယ်ကိုလျော့နည်းစေသည်။ ဆယ်ကျော်သက်များ၊ မသန်မစွမ်းသောအွန်လိုင်းထိတွေ့မှုသို့မဟုတ်လိင်အရမတရားပြုမှုခံရသည်ဟုသတင်းပို့သောလူငယ်များ၊ စိတ်ဖိစီးမှုခံစားနေရသောလူငယ်များ၊ နယ်စပ်ဒေသသို့မဟုတ်ကလေးသူငယ်အပြုအမူစစ်ဆေးမှုစာရင်းအောက်ရှိစိတ်ဓာတ်ကျမှုအတွက်အမှတ်ပေးခံရသည့်လူငယ်များသည်ဆယ်ကျော်သက်များအတွက်ပိုမိုဆိုးရွားသည်။ ဓါတ်ပုံများကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်၊ ဖိုင်များဝေငှရန်ပရိုဂရမ်များကို သုံး၍၊ လိင်အကြောင်းအကြောင်းကိုအွန်လိုင်းပေါ်တွင်ပြောဆိုခြင်း၊ သူငယ်ချင်းများအိမ်တွင်အင်တာနက်ကိုသုံးခြင်း၊ နယ်စပ်တွင်သို့မဟုတ်ကလေးသူငယ်အပေါ်သိသိသာသာသိသိသာသာများပြားသောဆယ်ကျော်သက်များ၊ ယောက်ျားလေးများနှင့်လူငယ်များအတွက်အလိုရှိသည့်ထိတွေ့မှုနှုန်းသည်ပိုမိုမြင့်မားသည်။ စည်းကမ်းချိုးဖောက်မှုအတွက်အပြုအမူစစ်ဆေးရမည့်စာရင်း subscale ။ စိတ်ကျရောဂါသည်လူငယ်အချို့အတွက်အန္တရာယ်ရှိနိုင်သောအချက်တစ်ချက်ဖြစ်နိုင်သည်။ စစ်ထုတ်ခြင်းနှင့်ပိတ်ဆို့ခြင်းဆော့ (ဖ်) ဝဲကိုအသုံးပြုသောလူငယ်များသည်လိုချင်သောထိတွေ့မှုနည်းသည်။
လူငယ်အပေါ်ကိုအင်တာနက်ညစ်ညမ်း၏အလားအလာသက်ရောက်မှုကိုရည်မှတ်ထက်ပိုသောသုတေသနထိတွေ့မှု၏မြင့်နှုန်းဘယ်လောက်ထိတွေ့မှုမလိုအပ်သောဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကို, ဒီလိုစိတ်ကျဝေဒနာ, လူ့သားကောင်နှင့်ဆိုးသွမ်းသဘောထားတွေအဖြစ်အချို့သောအားနည်းချက်များနှင့်အတူလူငယ်ရှိသည်ဟူသောအချက်ကိုပေးထား, မျက်ခြေမပြတ်ဖြစ်ပါတယ် ပိုပြီးထိတွေ့မှု။
Key ကိုစကား: အင်တာနက်ကို, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်း, ညစ်ညမ်းမြီးကောင်ပေါက်
အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းထိတွေ့ခံရခြင်း၏လူငယ်ဖို့ဖြစ်နိုင်သမျှပျက်ဆီးအကြောင်းကိုကျယ်ပြန့်စိုးရိမ်ပူပန်ရှိခဲ့သည်။ ဤရွေ့ကားစိုးရိမ်ပူပန်ဆေးပညာတည်ထောင်ခြင်းအားဖြင့်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့ကြ,1-4 စိတ်ပညာရှင်,5-8 အများပြည်သူ,9 ကွန်ဂရက်,10,11 ပင်ကိုအမေရိကန်တရားရုံးချုပ်။12,13 အတူတူယူ, စိုးရိမ်ပူပန်ဤအသုံးအနှုနျးမြားလူငယ်အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းကနေကာကှယျခံရသင့်ကြောင်းကျယ်ပြန့်သဘောတူညီမှုရှိကွောငျးအကြံပြုအပ်ပါသည်။
ဒီစိုးရိမ်ပူပန်မှုအားပေးခြင်းအများအပြားလူငယ်အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းထိတွေ့ဖြစ်ကြောင်းအသိပညာဖြစ်ပါတယ်။14-21 ဒီထိတွေ့မှုအချို့သည်မိမိဆန္ဒအလျောက်ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ဦး 2005 စစ်တမ်းမှာစာရေးသူအသက် 13 နှစ်ပေါင်းမှတဆင့်လူငယ်အင်တာနက်အသုံးပြုသူများ 10 ၏ 17% အတိတ်နှစျတှငျရည်ရွယ်ချက်အပေါ် X-rated က်ဘ်ဆိုဒ်များကိုသွားရောက်ကြည့်ရှုကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။14 သို့သော် ပို. ပင်လူငယ် (34%) အဓိကအားဖြင့်ရှာဖွေမှုများကိုသို့မဟုတ်စာလုံးပေါင်းမှားက်ဘ်လိပ်စာများကိုတုံ့ပြန်ဒါမှမဟုတ် web site များအတွင်းလင့်များမှတဆင့်ဖွင့်လာသည်ဟုညစ်ညမ်းဆိုက်များလင့်ခ် (ကြိမ်နှုန်း၏နိုင်ရန်အတွက်) မှတဆင့်သူတို့မြင်ချင်ခဲ့ပါဘူးအွန်လိုင်းညစ်ညမ်းထိတွေ့ခဲ့သည် , pop-up ကြော်ငြာတွေ, နှင့် spam များကို e-mail, ။14 မလိုချင်တဲ့ထိတွေ့မှု၏ဤဒီဂရီသစ်တစ်ခုဖြစ်ရပ်ဆန်းဖြစ်နိုင်သည်; အင်တာနက်ဖှံ့ဖွိုးတိုးတမီ, သူတို့ပုံမှန် unsought ညစ်ညမ်းကြုံတွေ့ရမယ်ဘယ်မှာလူငယ်မကြာခဏအနည်းငယ်သောအရပ်တို့ကိုမရှိခဲ့သည်။ သူတို့ကအင်တာနက်ပေါ်ရှိမလိုချင်တဲ့ညစ်ညမ်းကြုံတွေ့ရသည့်အခါအရှိဆုံးလူငယ်အထူးသဖြင့်စိတ်ဆိုးမစပ်ဆိုင်ကြောင်းကိုသက်သေအထောက်အထားလည်းမရှိပေမယ့်,14,17 မလိုချင်တဲ့ထိတွေ့ညစ်ညမ်းနှင့်အတူမိမိဆန္ဒအလျောက်တွေ့ဆုံထက်အချို့သောလူငယ်တစ်ဦးထက် သာ. ကြီးမြတ်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ တချို့ကလူငယ်သည်အခြားသတင်းရင်းမြစ်များမှရရှိနိုင်သည့်ညစ်ညမ်းထက်ပိုဂရပ်ဖစ်များနှင့်အစွန်းရောက်ဖြစ်နိုင်သည်မလိုချင်တဲ့ထိတွေ့မှု, နှင့်အွန်လိုင်းပုံရိပ်တွေများအတွက်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ကြီးထွားပြေးလမ်းဖြစ်နိုင်သည်။9,14
စိုးရိမ်ပူပန်မှုများ, အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းမှမလိုချင်တဲ့ထိတွေ့ခြင်းမှထည့်သွင်းခြင်းအားလုံးအသက်အရွယ်အုပ်စုများ (34-2005 နှစ်) နှင့်ယောက်ျားလေးများနှင့်မိန်းကလေးများနှစ်ဦးစလုံးအကြားတိုးအတူ 25 မှ 1999 အတွက် 2000% ကနေ 10 အတွက်လူငယ်အင်တာနက်အသုံးပြုသူများ၏ 17% အထိမြင့်တက်, တိုးမြှင့်ခဲ့သည်။22 ထို့အပြင်အင်တာနက်အသုံးပြုမှုကို 2000 ကတည်းကလျှင်မြန်စွာတိုးချဲ့ခဲ့သည်။23 အသက် 12 မှလူငယ် 17 ၏ရှစ်ဆယ်ခုနစ်ရာခိုင်နှုန်းက 2005 အတွက် 73% နှင့်နှိုင်းယှဉ် 2000 အတွက်အင်တာနက်ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ ဤရွေ့ကားနံပါတ်များကိုလူငယ်အင်တာနက်အသုံးပြုသူများသန်းပေါင်းများစွာနှစ်စဉ်မလိုချင်တဲ့အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းထိတွေ့ဖြစ်ကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။14 သို့သော်ညစ်ညမ်းမှထိတွေ့မှု၏ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာလမ်းကြောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းအချက်အလက်, ထိတွေ့မှု၏အသက်အရွယ်၏စည်းကမ်းချက်များ၌, ယောက်ျားလေးများနှင့်မိန်းကလေးများအဘို့အချို့တဲ့ဖြစ်ပါတယ်။
ပုံရိပ်တွေထုတ်လွှင့်မှုအတွက်အင်တာနက်နည်းပညာ၏စွမ်းရည်များပေးထား24-28 နှင့်အွန်လိုင်းညစ်ညမ်း၏ရန်လိုစျေးကွက်ရှာဖွေရေး,9 ဒါကြောင့်မလိုလားအပ်သောထိတွေ့လူငယ်ထိတွေ့ဆက်ဆံရသောအင်တာနက်အသုံးပြုမှုအမျိုးအစားများသို့မဟုတ်အထူးသဖြင့်လူဦးရေအချိုးအစားသို့မဟုတ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလက္ခဏာများမသက်ဆိုင်သောဆိုက်ဘာစပေ့တစ်အန္တရာယ်, ဖြစ်လာသည်ကြောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ 1999 မှ 2000 အတွက်ကောက်ယူထားတဲ့ဆင်တူစစ်တမ်းကနေအချက်အလက်များ၏ကျွန်ုပ်တို့၏ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမလိုချင်တဲ့ထိတွေ့ခြင်းသည်အင်တာနက်အသုံးပြုမှုကိုအချို့အမျိုးအစားများနှင့်ဆက်စပ်သောခဲ့ကွောငျးတှေ့ရှိနှင့်စိတ်ကျရောဂါများနှင့်အတွေ့အကြုံရှိအနုတ်လက္ခဏာဘဝဖြစ်ရပ်များထဲကနေခံစားခဲ့ရသူကိုလူငယ်များအကြား သာ. ကြီးမြတ်ဖြစ်ခဲ့သည်။19 သို့သျောထိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသည့်မလိုချင်တဲ့ထိတွေ့မှုအုပ်စုမလိုချင်တဲ့နှစ်ဦးစလုံးနှင့်ထိတွေ့မှုလိုခငျြတဲ့သူလူငယ်တစ်ဦးအချိုးအစားအတွက်ပါဝင်သည်။ အလိုထိတွေ့မှုသက်ငယ်ပြစ်မှု, ပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှုနှင့်စိတ်ကျရောဂါနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်သောကြောင့်,16 တစ်ယောက်တည်းအလိုထိတွေ့အသင်းများအတွက်မှတ်နိုင်တယ်။ ထို့အပြင်လူငယ်များသည်အင်တာနက်အသုံးပြုမှုအချို့ကိုဝိသေသလက္ခဏာများအစောပိုင်းစစ်တမ်းကတည်းကပြောင်းလဲပြီ,14 နှင့်သုတေသနအချို့လူငယ်ထိုကဲ့သို့သောအွန်လိုင်းနှောင့်ယှက်ခြင်းနှင့်မလိုချင်တဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမြှူဆွယ်တောင်းခံလက်ခံရရှိထားကြောင်းအဖြစ်ပြဿနာကအင်တာနက်အတွေ့အကြုံများ, ပိုမိုကျရောက်နေတဲ့ဖြစ်ကြောင်းပြသခဲ့သည်။29 ဒါ့အပြင်, အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းမှထိတွေ့မှုကာကွယ်တားဆီးဖို့မကြာသေးမီအားထုတ်မှုထိုကဲ့သို့သောတွေ့ဆုံရှိသည်သောလူငယ်၏ကိုယ်ရေးအကျဉ်းကိုထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်, 2005 အသုံးပြုပုံလူငယ်အင်တာနက်အသုံးပြုသူများ၏ 21% ဥပဒေစိုးမိုးရေးအေဂျင်စီများအားဖြင့်တည်ခင်းဧည်အင်တာနက်ကိုဘေးကင်းလုံခြုံရေးအစီအစဉ်များကိုတက်ရောက်ခဲ့သည်ခဲ့ကြောင်းနှင့်မိသားစုများ၏ 55% သည်မိမိတို့ကလေးအွန်လိုင်းသွားကြဖို့အများဆုံးမကြာခဏအသုံးပြုသောကွန်ပျူတာပေါ်မှာဆော့ဖ်ဝဲကိုပိတ်ဆို့ခြင်း / filtering ကိုအချို့မျိုးထားရှိခဲ့သည်။14
ဒီလေ့လာမှုမှာကျနော်တို့ဒုတိယလူငယ်ကအင်တာနက်လုံခြုံမှုစစ်တမ်းမှအချက်အလက်များကိုအသုံးပြုလူငယ်အင်တာနက်အသုံးပြုသူများ၏အမျိုးသားရေးစစ်တမ်းမလိုချင်တဲ့၏ပြဿနာမှာအသစ်ကြည့်ဖို့, 2005 အတွက်ကောက်ယူနှင့်အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းထိတွေ့ချင်ခဲ့တယ်။ ကျနော်တို့သာ, အဘယ်သူမျှမထိတွေ့နှင့်အတူအုပ်စုများသို့မလိုချင်တဲ့ထိတွေ့လူငယ်ကွဲကွာ, ဒါမှမဟုတ်မဆိုထိတွေ့ချင်ခဲ့တယ်။ ကျနော်တို့2သုတေသနမေးခွန်းများကိုအမှာစကားပြောကြားသည်။ ပထမဦးစွာမလိုချင်တဲ့၏အတိုင်းအတာကားအဘယ်သို့နှင့်လူငယ်များအသက်အရွယ်နှင့်ကျား, မများ၏အခြေခံပေါ်မှာ, အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းထိတွေ့လိုလူငယ်အင်တာနက်အသုံးပြုသူများအကြား? ဒုတိယအချက်မှာဘယ်အရာကိုလူဦးရေအချိုးအစား, အင်တာနက်အသုံးပြုခြင်း, ကြိုတင်ကာကွယ်ရေး, ဒါမှမဟုတ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလက္ခဏာများမလိုချင်တဲ့နှင့်ဆက်စပ်သောနှင့်ထိတွေ့မှုလိုချင်ကြသလဲ ဒီတွေ့ရှိချက်တွေကိုကာကွယ်တားဆီးရေးကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများနှင့်လူငယ်အင်တာနက်အသုံးပြုသူများအကြားအွန်လိုင်းညစ်ညမ်း, အထူးသဖြင့်မလိုလားအပ်သောထိတွေ့မှုမှထိတွေ့မှု၏သက်ရောက်မှုနှင့် ပတ်သက်. အနာဂတ်သုတေသနအကြောင်းကြားနိုင်ပါတယ်ဘယ်လိုဆွေးနွေးပါ။
ကျနော်တို့လူငယ်အင်တာနက်အသုံးပြုသူများ၏အမျိုးသားရေးနမူနာအနေဖြင့်သတင်းအချက်အလက်စုဆောင်းရန်မတ်လနှင့်ဇွန်လ 2005 အကြားကောက်ယူတယ်လီဖုန်းအင်တာဗျူးကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ အဆိုပါသုတေသနတက္ကသိုလ်က New Hampshire ပြည်နယ်၏အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာသုံးသပ်ချက်ကိုဘုတ်အဖွဲ့ကအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။
အတိတ် 1500 လလောက်အနည်းဆုံးတစ်ကြိမ်တစ်လလျှင်အင်တာနက်ကိုအသုံးပြုခဲ့ကြသော:; သင်တန်းသားများကို 10 နှစ် 17 လူငယ်အသက် 14.24 (2.09 နှစ်ပေါင်း SD က6နှစ်ပေါင်းအသက်အရွယ်ဆိုလို) တို့ဖြစ်သည်။ နမူနာဝိသေသလက္ခဏာများဇယားမှာပြနေကြသည် 1။ ကောင်းပြီ-ပညာတတ်, သာယာဝပြောတဲ့မိသားစုများနှင့်အဖြူတစ်ဦးချင်းစီနမူနာအတွက် overrepresented ပေမယ့်ဒေတာစုဆောင်းမှု၏ထိုအချိန်ကလူငယ်အင်တာနက်အသုံးပြုသူများ၏လူဦးရေ approximated ခဲ့ကြသည်။30
နမူနာလက်ခဏာ (n = 1422)
နမူနာကျပန်း-ဂဏန်းခေါ်ဆိုမှုမှတဆင့်တီထွင်, တယ်လီဖုန်းနှင့်အတူအိမ်ထောင်စုများ၏အမျိုးသားရေးနမူနာအနေဖြင့်ရေးဆွဲခဲ့သည်။ နံပါတ်များ၏သဘောထားနှင့် ပတ်သက်. အသေးစိတ်ခေါ်ဆိုနှင့်နည်းလမ်းတစ်ခုထက်ပိုသော-အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်သည်အခြားစာပမြေားတှငျတှေ့နိုငျပါသညျ။14,29 တိုတောင်းသောအင်တာဗျူးများမိဘတွေနဲ့အတူကောက်ယူခဲ့ကြသည်, ထို့နောက်လူငယ်မိဘသဘောတူခွင့်ပြုချက်နှင့်အတူတွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့ပါသည်။ သူတို့လွတ်လွတ်လပ်လပ်နှင့်လျှို့ဝှက်စွာစကားပြောနိုင်သည့်အခါလူငယ်အင်တာဗျူးတွေ, လူငယ် '' အဆင်ပြေမှာစီစဉ်ထားခဲ့သည်။ ပျမ်းမျှအင်တာဗျူး ~30 မိနစ်ကြာခဲ့သည်။
ပြည်သူ့ထင်မြင်ချက်သုတေသနများအတွက်အမေရိကန် Association ကပြဋ္ဌာန်းစံလမ်းညွှန်ချက်များအပေါ် အခြေခံ. အဆိုပါတုံ့ပြန်မှုမှုနှုန်း, 45% ဖြစ်ခဲ့သည်။31 အစောပိုင်းဆယ်စုနှစ်များတွင်စစ်တမ်းများ၏ပုံမှန်နှုန်းထားများထက်နိမ့်သောဤနှုန်းသည်အခြားမကြာသေးမီကသိပ္ပံနည်းကျအိမ်ထောင်စုစစ်တမ်းများနှင့်အညီဖြစ်ပါသည်,32 အရာကိုယ်စားလှယ်နမူနာရရှိရန်ဆက်လက်နိမ့်တုန့်ပြန်မှုနှုန်းရှိနေသော်လည်းအမေရိကန်လူဦးရေရဲ့အမြင်များနှင့်အတွေ့အကြုံများကိုအကြောင်းကိုတိကျသည့်ဒေတာများကို။33
မလိုချင်တဲ့ Exposure, အွန်လိုင်းနှောက်ယှက်ခြင်းနှင့်မလိုချင်သောလိင်ကိုမြှူဆွယ်တောင်းခံ
ကျနော်တို့တစ်ဦးသို့မဟုတ်အောက်ပါမေးခွန်းများကိုနှစ်ခုစလုံးမှဟုတ်ကဲ့ဖြေဆိုခြင်းအဖြစ်အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းမှမလိုချင်တဲ့ထိတွေ့သတ်မှတ်။ (1) "သငျသညျတခုအွန်လိုင်းရှာဖွေရေးလုပ်နေဒါမှမဟုတ် Web ကို surfing ခဲ့ကြသည်အခါအတိတ်နှစျတှငျ, သင်သည်အစဉ်အသင်သည်ထိုကြင်နာအတွက်ဖြစ်ချင်ဘူးသည့်အခါအဝတ်အချည်းစည်းလူများ၏သို့မဟုတ်လိင်ဆက်ဆံလူများ၏ရုပ်ပုံများကိုပြသတဲ့ web site ကိုအတွက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုရှာဖွေခဲ့ကြ site ၏? "(2)" အတိတ်ကိုနှစျတှငျ, သင်သည်အစဉ်အသငျသညျအချည်းစည်းလူများ၏သို့မဟုတ်သင်ချင်မလိင်ဆက်ဆံလူမျိုး၏အမှန်တကယ်ဓါတ်ပုံတွေကိုပြသတဲ့သတင်းစကားထဲမှာမက်ဆေ့ခ်ျကိုတစ်ခုသို့မဟုတ် link ကိုဖွင့်လှစ်ခဲ့တာလဲ "
ငါတို့သည်လည်းညစ်ညမ်းထိတွေ့အမည်ရ, အွန်လိုင်းနှောင့်ယှက်ခြင်းနှင့်မလိုချင်တဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမြှူဆွယ်တောင်းခံလက်ခံရရှိထားကြောင်း, ထိုစစ်တမ်းအတွက်စုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့ကြသည်အခြားပြဿနာကအင်တာနက်အတွေ့အကြုံများ2နှင့်ဆက်စပ်သောစေခြင်းငှါရှိမရှိဆန်းစစ်ခဲ့သည်။ အွန်လိုင်းနှောင့်ယှက်ခြိမ်းခြောက်မှုဒါမှမဟုတ်လူငယ်အွန်လိုင်းကိုစလှေတျသို့မဟုတ်ကြည့်ဖို့အခြားသူတွေများအတွက်လူငယ်အကြောင်းကိုအွန်လိုင်း posted သည်အခြားထိုးစစ်အပြုအမူအဖြစ်သတ်မှတ်ခံခဲ့ရသည်။ မလိုချင်တဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမြှူဆွယ်တောင်းခံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများသို့မဟုတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဟောပြောပွဲအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့ဒါမှမဟုတ်လိုချင်သို့မဟုတ်တစ်ခုအရွယ်ရောက်ပြီးသူတို့ကလုပ်ခဲ့ကြသည်မဟုတ်လော, မလိုချင်တဲ့ခဲ့ကြသည်သို့မဟုတ်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်ပေးဖို့တောင်းဆိုမှုအဖြစ်သတ်မှတ်ခံခဲ့ရသည်။
မည်သည့်အဖြစ်အပျက်မလိုချင်တဲ့ထိတွေ့မှု, အွန်လိုင်းနှောင့်ယှက်, ဒါမှမဟုတ်မလိုချင်တဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတောင်းနိုင်အောင်ကဲ့သို့ထင်မှတ်ခဲ့သည်မီ, အရွယ်အရေးအခင်းများ၏အသေးစိတ်အကြောင်းကိုနောက်ဆက်တွဲမေးခွန်းများကိုဖြေဆိုရန်လိုအပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဤရွေ့ကားအသေးစိတျကိုအလူငယ်တုံ့ပြန်မှုမှန်ကန်ကြောင်းသက်သေပြရန်နှင့်အဖြစ်အပျက်ဝိသေသလက္ခဏာများနှင့် ပတ်သက်. ဒေတာစုဆောင်းဖို့ခွင့်ပြုခဲ့ပါသည်။ သောကြောင့်အချိန်အခက်အခဲ၏, သို့သော်, နောက်ဆက်တွဲမေးခွန်းများကို2ဖြစ်စဉ်များမှကန့်သတ်ကြသည် ဟူ. ၎င်း, နောက်ဆက်တွဲမေးခွန်းများကိုများအတွက်ဖြစ်စဉ်များကိုရှေးခယျြဖို့အသုံးပြုတဲ့ algorithm ကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဘို့သူတို့အားဖြစ်ပွားမှု၏လုံလောက်သောနံပါတ်များကိုသေချာစေရန်, နှောင့်ယှက်ခြင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတောင်းနိုင်အောင်ဦးစားပေးစားလေ၏။ သူတို့မှာလည်းပိုမိုမြင့်မား-ဦးစားပေးနှောင့်ယှက်ခြင်းနှင့်တောင်းနိုင်အောင်ဖြစ်စဉ်များအစီရင်ခံကွောငျ့ဒီ algorithm ကို၏, Screener မေးခွန်းများကိုတွင်မလိုလားသည့်ထိတွေ့မှုအစီရင်ခံတင်ပြသူကို 112 လူငယ်ထိတွေ့မှုနှင့် ပတ်သက်. နောက်ဆက်တွဲမေးခွန်းများကိုမဖြေခဲ့ပါဘူး။ သူတို့အား 112 လူငယ်၏, 34 လည်းထိတွေ့မှုလိုခငျြနှင့်လိုထိတွေ့မှုအုပ်စုရေတွက်ခဲ့ကြသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ကျန်ရှိနေသေးသော 78 လူငယ် 1422 တစ်နမူနာထွက်ခွာလက်ရှိဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းမှဖယ်ထုတ်လိုက်ခဲ့ကြသည်။ ကျနော်တို့အလားတူစစ်တမ်းကနေအချက်အလက်များ၏ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းကိုင်တွယ်ပုံကိုအတူတသမတ်တည်းဖြစ်ဤလူငယ်ဖယ်ထုတ်ထား19 နှင့်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျနော်တို့အဖြစ်အပျက်ဝိသေသလက္ခဏာများနှင့်အတူ၎င်းတို့၏တုံ့ပြန်မှုမှန်ကန်ကြောင်းသက်သေပြလို့မရဘူး။ သို့သျောကြှနျုပျတို့ဖြစ်ကောင်းမလိုချင်တဲ့ထိတွေ့မှုဖြစ်စဉ်များရှိသူ 78 လူငယ်ဖယ်ထုတ်ပြီး၏သက်ရောက်မှုနှင့် ပတ်သက်. စိုးရိမ်ပူပန်ခဲ့ကြသည်။ ထို့ကွောငျ့ကြှနျုပျတို့သညျလညျးမလိုချင်တဲ့ထိတွေ့မှုအုပ်စုသည် (ဒေတာပြမပါ) တွင်ထည့်သွင်းသူတို့အား 78 ဖြစ်ပွားမှုနှင့်အတူဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းကောက်ယူ; ယင်းတွေ့ရှိချက်အမှုများဖယ်ထုတ်လိုက်သောအခါအဖြစ်သိသိသာသာအတူတူပင်ဖြစ်ကြသည်။ ထို့အပြင်ကျနော်တို့နှောင့်ယှက်ခြင်းနှင့် multivariate ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမြှူဆွယ်တောင်းခံ၏အစီရင်ခံဘို့ထိန်းချုပ်ထား။
သူတို့ရည်ရွယ်ချက်အပေါ်အင်တာနက်ကိုတခုတခုအပေါ်မှာ X-rated site ကိုမှထွက်သွားဒါမှမဟုတ်အတိတ်နှစျတှငျရည်ရွယ်ချက်အပေါ်ဖိုင်တစ်ဖိုင်-sharing အစီအစဉ်ကို အသုံးပြု. လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်တွေဒေါင်းလုပ်လုပ်ခဲ့ကြောင်းသူကိုလူငယ်အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းထိတွေ့လိုချင်ဘဲလျက်အဖြစ်ခွဲခြားခဲ့ကြသည်။ ကျနော်တို့မဆိုသာမလိုချင်တဲ့ထိတွေ့မှုအစီရင်ခံသောအုပ်စုတစု (ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်း3အုပ်စုများနှင့်အတူကောက်ယူခဲ့ကြသည့်အခါတွေ့ရှိချက်အလားတူခဲ့ကြသည်, ဆိုလိုသည်မှာတစ်ဦးရှင်းရှင်းလင်းလင်းရုပ်ပုံပေးရသည်လိုထိတွေ့မှုအုပ်စုတွင်ထိတွေ့မှုလိုချင်အတူသာ, မလိုချင်တဲ့ထိတွေ့လူငယ်ခွဲခြားသာထိတွေ့လိုနှင့်နှစ်ဦးစလုံး ) ။ ကျွန်တော်တစ်ဦးအနည်းငယ်ယေဘုယျမေးခွန်းတွေမေးခဲ့တယျပေမယ့်သောကြောင့်အချိန်ကန့်သတ်ခြင်း, ကျနော်တို့ကိုသူတို့ "ကိုအတူတကွသူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူသို့မဟုတ်ခဲ့ကြသည်အခါလူငယ်ရည်ရွယ်ချက်အပေါ် X-rated က်ဘ်ဆိုက်များကြည့်ရှုခဲ့ကြခြင်းရှိမရှိအပါအဝင်, လိုထိတွေ့မှု၏တိကျသောဖြစ်ရပ်များနှင့် ပတ်သက်. နောက်ဆက်တွဲမေးခွန်းများကိုမမေးခဲ့ဘူး သငျသညျကိုသိသည်အခြားကလေးတွေ။ "
မိဘများအိမ်သူအိမ်သားပညာရေးနှင့်ဝင်ငွေ, မိသားစုဖွဲ့စည်းပုံများနှင့်လူငယ်အသက်အရွယ်နှင့်ကျားမအပေါ်သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ လူငယ်ပြိုင်ပွဲနှင့်လူမျိုးစုအပေါ်သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
ကျနော်တို့အွန်လိုင်းသုံးစွဲအချိန်လူငယ်ခန့်မှန်းချက်များနှင့်အတူအတွေ့အကြုံနှင့်အင်တာနက်အရေးပါပုံကို၏ Self-ratings အပေါ်အခြေခံပြီးခဲ့မြင့်အနိမ့်သည်အင်တာနက်အသုံးပြုမှုအတွက်တစ်ဦးပေါင်းစပ် variable ကိုဖန်တီးခဲ့သည်။ မြင့်မားသောအင်တာနက်ကိုအသုံးပြုခြင်းသည်နှင့်အတူလူငယ်ယုတ်အထက်တွင်≥1 SD ကသွင်းယူနှင့်အနိမ့်သည်အင်တာနက်အသုံးပြုမှုနှင့်အတူသူတို့အားယုတ်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော≥1 SD ကသွင်းယူခဲ့ကြပါတယ်။
ကျနော်တို့ကိုသူတို့လက်ငင်းစာတိုပေးပို့များအတွက်အင်တာနက်ကိုအသုံးပြုကြသည်ရှိမရှိလူငယ်မေးသောအခါ, အခန်းပေါင်း chat သွားဖို့; ဂိမ်းများကိုဆော့ကစားရန်, ဂီတသို့မဟုတ်ပုံရိပ်တွေ (ဓာတျပုံ, ဗီဒီယိုများ, သို့မဟုတ်ရုပ်ရှင်) ဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်ဖိုင်-sharing အစီအစဉ်များကိုသုံးစွဲဖို့; အွန်လိုင်းမှဂျာနယ်သို့မဟုတ်ဘလော့ဂ်စောင့်ရှောက်ရန်, သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူအွန်လိုင်းစကားပြော; သူတို့မျက်နှာမှမကျြနှာကိုမသိခဲ့ပါလူတို့နှင့်အတူအွန်လိုင်းစကားပြော; နှင့်လိင်, ညစ်ညမ်းမှထိတွေ့မှုနှင့်ဆက်စပ်နိုင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသိချင်စိတ်တစ်ခုအရိပ်အယောင်အကြောင်းကိုမသိသောလူမျိုးသည်အွန်လိုင်းစကားပြောဖြစ်ပါတယ်။ လူငယ်အင်တာနက်ကို (အိမ်, ကျောင်း, မိတ်ဆွေများကို '' နေအိမ်များ, ဒါမှမဟုတ်ဆယ်လူလာဖုန်း) ကိုအသုံးပြုဘယ်မှာအပြင်ကျနော်တို့ကိုမေးခဲ့တယ်။ သူတို့အိမ်မှာကွန်ပျူတာတစ်လုံးရှိခဲ့လျှင်တည်ရှိခဲ့သည်ရှိရာ, ထို့နောက်ကျွန်တော်မေးတယ်။
ကျနော်တို့ကိုသူတို့အများဆုံးမကြာခဏအသုံးပြုသောကွန်ပျူတာ pop-up ကြော်ငြာတွေသို့မဟုတ် spam များကို e-mail, ပိတ်ဆို့ခံရခြင်းနှင့်သူတို့ကတခြားဆော့ဗ်ဝဲခဲ့ရှိမရှိပေးတဲ့ဆော့ဗ်ဝဲခဲ့ရှိမရှိလူငယ်ဟုမေး "filter များ, လုပ်ကွက်, ဒါမှမဟုတ်မော်နီတာသင်အင်တာနက်အသုံးပြုဘယ်လို။ " ကျနော်တို့ကလည်းမိဘတစ်ဦးရှိမရှိမေးခဲ့တယ် သို့မဟုတ်ကျောင်းမှာအရွယ်ရောက်ပြီးသူအစဉ်အဆက် "အင်တာနက်ပေါ်ရှိ X-rated ဓါတ်ပုံတွေကိုမြင်လျှင်အကြောင်းကို" နှင့်သူတို့အစဉ်အဆက်ဖူးခြင်းရှိမရှိသူတို့ကိုစကားပြောဖူး "ဟုရဲအရာရှိသို့မဟုတ်ဥပဒေစိုးမိုးရေးအတွက်တစ်စုံတစ်ဦးကဦးဆောင်ခဲ့သည်အင်တာနက်ဘေးကင်းလုံခြုံရေးအကြောင်းတင်ဆက်ခဲ့။ "
လူငယ်, သူတို့ရဲ့အဓိကစောင့်ရှောက်သူများ nagged ဘယ်လောက်မကြာခဏမေးသော်အော်နှင့်အခွင့်ထူးပယ်ရှင်းပြီခဲ့ကြသည်။ ဤအ variable တွေကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်ကျနော်တို့ကပေါင်းစပ် variable ကိုတိုင်းမိဘကလေးပဋိပက္ခဖန်တီးနှင့်အခြားလူငယ်နှင့်အတူမြင့်မားတဲ့ပဋိပက္ခ (ထိုအတောအတွင်းအထက်တစ်ဦးပေါင်းစပ်တန်ဖိုးကို≥1 SD က) နဲ့လူငယ်နှိုင်းယှဉ်ဖို့ dichotomized variable ကိုဖန်တီးခဲ့သည်။
အော့ဖ်လိုင်းခံရသူနှစ်ဦးမှာတင်းပါဝင်သည်ခဲ့ကြသည်ဟုအမည်ရ, အတိတ်နှစျတှငျစော်ကားခံရခြင်း (ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးစားမှုပေါင်းစပ်) နှင့်လွန်ခဲ့သောတစ်နှစ်အတွက် (တစ်ခုခုခိုးယူသို့မဟုတ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာရွယ်တူများကစော်ကားခံရခြင်းရှိခြင်းဥပမာ) အခြားလူ့သားကောင်ကြုံနေရ။ ကျနော်တို့အသက် 11 နှစ်လူငယ် 18 ဘို့အတည်ပြုသောကလေးအပြုအမူစာရင်း (CBCL) ၏လူငယ် Self-အစီရင်ခံစာ အသုံးပြု. ဆေးခန်းနယ်စပ်ဒေသသို့မဟုတ်သိသာထင်ရှားသောအပြုအမူပြဿနာများအကဲဖြတ်။34 လက်ရှိလေ့လာမှု5subscales, ကျူးကျော်တိုင်းတာခြင်း, အာရုံစူးစိုက်မှုပြဿနာများ, စည်းမျဉ်း-ကြေကွဲ, လူမှုရေးပြဿနာများနှင့်ဆုတ်ခွာ / စိတ်ကျရောဂါပါဝင်သည်။ ရမှတ်များဟာနယ်စပ်ဒေသသို့မဟုတ်ဆေးခန်းသိသိသာသာအကွာအဝေးအတွင်းသွင်းယူသောသူတို့အားသိရှိနိုင်ဖို့ dichotomized ခဲ့ကြသည်။
ငါတို့ရှိသမျှသည်ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းများအတွက် SPSS 14.0 (SPSS, ချီကာဂို, IL) ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ ပထမဦးစွာကျွန်တော်မလိုချင်တဲ့၏နှုန်းထားများဆနျးစစျဖို့ဖော်ပြရန်စာရင်းဇယားကိုသုံးခြင်းနှင့်အသက်အရွယ်နှင့်ကျား, မများ၏အခြေခံပေါ်မှာ, အတိတ်တစ်နှစ်တွင်အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းထိတွေ့ချင်ခဲ့တယ်။ ဒုတိယအချက်မှာကျွန်တော်χကိုအသုံးပြု2 မလိုချင်တဲ့နှင့်ဆက်စပ်နှင့် bivariate အဆင့်မှာထိတွေ့မှုလိုချင်ခဲ့ကြသည်လူဦးရေအချိုးအစားအရာ, အင်တာနက်အသုံးပြုခြင်း, ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလက္ခဏာများကိုဆုံးဖြတ်ရန် Cross-မဲပုံး။ တတိယကျနော်တို့ .05 အဆင့်မှာခြုံငုံစာရင်းအင်းမော်ဒယ်မှသိသိသာသာအလှူငွေဘို့ဖြစ်နိုင်ခြေကိုအချိုးစမ်းသပ်မှုနှင့်အတူ, မလိုချင်တဲ့သို့မဟုတ်ထိတွေ့မှုလိုခငျြနဲ့ဆက်စပ်ဝိသေသလက္ခဏာများတစ် multinomial Logistic ဆုတ်ယုတ်မော်ဒယ်ဖန်တီးခဲ့သည်။ အဆိုပါရည်ညွှန်းအမျိုးအစားမျှထိတွေ့မှုနှင့်အတူလူငယ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ကျနော်တို့ရလဒ်များအပေါ်ခိုင်မာတဲ့လွှမ်းမိုးမှုကွိုးစားအားထုအင်တာနက်အသုံးပြုမှုအသက်အရွယ်နှင့်ရှုထောင့်မည်ဟုမျှော်လင့်သောကြောင့်, ကျနော်တို့ bivariate အတွက် .25 အဆင့်ကိုလေ့လာဆန်းစစ်မှာသိသိသာသာရှိသမြှသော variable တွေကိုပါဝင်သည်။35
မလိုချင်တဲ့နှင့်ခေတ်နှင့်ကျား၏အဆိုအရလူငယ်ကအင်တာနက်အသုံးပြုသူများအနက် Exposure Wanted
လေးဆယ်နှစ်ရာခိုင်နှုန်း (n = လူငယ်အင်တာနက်အသုံးပြုသူများ၏ 603) အတိတ်ကာလတစ်နှစ်တွင်အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းထိတွေ့ခဲ့သညျ။
အဆိုပါထိတွေ့လူငယ်, 66% (၏n = 400) (သာမလိုချင်တဲ့ထိတွေ့မှုနှင့် 34% သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်n = 203) (ဖော်ပြခဲ့သည်ဖြစ်စေသာထိတွေ့ချင်ခဲ့တယ်n = 91) သို့မဟုတ်နှစ်ဦးစလုံးလိုခငျြနဲ့မလိုချင်တဲ့ထိတွေ့မှု (n = 112) ။
အစီရင်ခံ 1 နှစ်အရွယ်ယောက်ျားလေးများထံသို့ 10- သာ 11% အတိတ်နှစျတှငျထိတွေ့လိုချင်သော်လည်းအချိုးအစားအသက် 11 နှစ်, အသက် 12 နှစ်ယောက်ျားလေးများ 13 ၏% 26 အဲဒီ 14 ၏ 15% တိုးတက်နှင့် 38 အသက်သူတို့အား 16 17 မှနှစ်ပေါင်း% (ပုံ 1).
မလိုချင်တဲ့ထိတွေ့မှုလည်းအသက်အရွယ်နှင့်အတူတိုးတက်လာခဲ့သည်။ 10 မှတဆယ်ခုနစ်အသက် 11 နှစ်ယောက်ျားလေးများ 22 ၏ရာခိုင်နှုန်းကိုယောက်ျားလေးများ 12 ၏ 13% အသက် 26 နှစ်ပြုသကဲ့သို့အသက် 14 နှစ်, အတိတ်နှစျတှငျသူများ 15 ၏ 30% မလိုချင်တဲ့ထိတွေ့မှုရှိခဲ့ခြင်း, သူများ 16 ၏ 17% အသက်။ အဲဒီ 14 ထက်ပိုသုံးပုံနှစ်ပုံရှိခဲ့ပါတယ်အဖြစ်ဤရွေ့ကား, အသက် 15 နှစ်နှစ်ဦးနှစ်ဖက်သီးသန့်အမျိုးအစားနှင့်ဥပမာ, အထီးလူငယ်အင်တာနက်အသုံးပြုသူများ 16 ၏တစ်ဦးထက်ပိုတစ်ဝက်မလိုချင်တဲ့ဖြစ်စေထိတွေ့ဒါမှမဟုတ်အတိတ်တစ်နှစ်တွင်အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းလိုချင်ခဲ့ခဲ့ကြသည် အသက် 17 နှစ်ပေါင်း။
(မလိုချင်တဲ့နှင့်ယောက်ျားလေးများကြားတွင်အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းထိတွေ့ချင်ခဲ့တယ်n = 727) ။ ကျားဒေတာ2ကိစ္စများတွင်ပျောက်ဆုံးခဲ့သည်။
Little ကလိုထိတွေ့မိန်းကလေးငယ် (ပုံအားဖြင့်အစီရင်ခံခဲ့သည် 2) ။ 2% နှင့်မိန်းကလေးများ5၏ 10% အကြားအသက်အရွယ်, 11 ၏ 12 နှစ်အသက်အရွယ်နှင့် 13 ၏ 14 နှစ်အသက် 15 နှစ်သူတို့ကအတိတ်ကာလတစ်နှစ်အတွက်ရည်ရွယ်ချက်အပေါ် X-rated က်ဘ်ဆိုက်များမှထွက်သွားကလည်း, အသက် 8 နှစ်မိန်းကလေးများ 16 ၏ 17% ပြုခဲ့သည်။ လွန်ခဲ့သောနှစ်တွင်မလိုချင်တဲ့ထိတွေ့အသက် 16 နှစ်သူတို့အား 10 ၏ 11% ကနေအသက် 38 နှစ်သူတို့အား 16 ၏ 17% အထိ, မိန်းကလေးများအကြားအသက်အရွယ်နှင့်အတူတိုးတက်လာခဲ့သည်။
(မလိုချင်တဲ့နှင့်မိန်းကလေးများအကြားအွန်လိုင်းညစ်ညမ်းထိတွေ့ချင်ခဲ့တယ်n = 693) ။ ကျားဒေတာ2ကိစ္စများတွင်ပျောက်ဆုံးခဲ့သည်။
မလိုချင်တဲ့နှင့် Wanted Exposure ၏ Bivariate အသင်း
အလိုထိတွေ့မှုအစီရင်ခံသောသူတို့၏အမျိုးအလုနီးပါးအားလုံး (စားပွဲတင်ကဲ့သို့မလိုလားအပ်သောထိတွေ့မှုအစီရင်ခံတင်ပြသူကိုလူငယ်အများစုကအသက်နှစ်ပေါင်း 13 ရန်, 17 ဆယ်ကျော်သက်ခဲ့ကြသည် 2) ။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်အနည်းငယ်လူဦးရေဆိုင်ရာဝိသေသလက္ခဏာများနှင့်ဆက်စပ်သောခဲ့ကြသည်။ သို့သော် bivariate အတွက်သိသာထင်ရှားသောခဲ့ကြသည်တိုင်းတာ, အင်တာနက်အသုံးပြုမှုအများဆုံးကြိုတင်ကာကွယ်ရေးနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလက္ခဏာများ≤.01မှာလေ့လာဆန်းစစ်။
(မလိုချင်တဲ့နဲ့ဆက်စပ်နေတဲ့လက်ခဏာနှိုင်းယှဉ် Bivariate နှင့်အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံထိတွေ့ Wantedn = 1422)
မလိုချင်တဲ့နှင့် Wanted Exposure နှင့်အတူ Multivariate အသင်း
(:; 13% ယုံကြည်မှုကြားကာလ [CI] 17: 1.9-95 လေးသာမှုအချိုးအစား [OR]), ဒါပေမယ့်ဘယ်သူမျှမ no-ထိတွေ့မှုအုပ်စု, ဆယ်ကျော်သက် (အသက်၏ 1.3-2.7 နှစ်) နှင့်အတူနီးပါးနှစ်ကြိမ်အဖြစ်မလိုချင်တဲ့ထိတွေ့မှုအစီရင်ခံရန်ဖြစ်နိုင်ဖွယ်ခဲ့ကြသည်နှိုင်းယှဉ်လျှင် သည်အခြားလူဦးရေဆိုင်ရာဝိသေသနှင့်ဆက်စပ်သောခဲ့ကြသည် (ဇယား 3) ။ အင်တာနက်ကိုသုံးစွဲခြင်းကသာ 1 ဝိသေသမလိုချင်တဲ့ထိတွေ့မှုနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်။ Internet မှပုံရိပ်များဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်ဖိုင်-sharing အစီအစဉ်များကိုအသုံးပြုတဲ့သူလူငယ်မလိုချင်တဲ့ညစ်ညမ်းရင်ဆိုင်နီးပါးနှစ်ကြိမ်အန္တရာယ်ရှိခဲ့ (OR: 1.9; 95% CI: 1.3-2.9) ။ သို့သျောလညျး, အွန်လိုင်းနှောင့်ယှက်ခံရသတင်းပေးပို့သူကိုလူငယ် (OR: 1.9; 95% CI: 1.1-3.2) သို့မဟုတ်မလိုချင်တဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမြှူဆွယ်တောင်းခံလက်ခံရရှိ (OR: 2.7; 95% CI: 1.7-4.3) လည်းမလိုချင်တဲ့ထိတွေ့မှုမြင့်မားလေးသာမှုရှိခဲ့ပါတယ်။ ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးအားထုတ်မှုနှစ်မျိုးမလိုချင်တဲ့ထိတွေ့မှုကနေတချို့ကာကွယ်မှုမတတ်နိုင်သလိုပဲ; (Pop-up ကြော်ငြာသို့မဟုတ် spam များကို e-mail, blockers ထက်အခြား) ဆော့ဖ်ဝဲ, filter မှပိတ်ဆို့ဖို့, ဒါမှမဟုတ်ကွန်ပျူတာလူငယ်အပေါ်ကိုအင်တာနက်အသုံးပြုမှုကိုစောင့်ကြည့်ဖို့ရှိခြင်းအများဆုံးမကြာခဏ 40% အားဖြင့်ထိတွေ့မှုများ၏ဖြစ်နိုင်ခြေကိုလျှော့ချနှင့်ဦးဆောင်အင်တာနက်ကိုဘေးကင်းလုံခြုံမှုနှင့် ပတ်သက်. တင်ပြချက်များကိုတကျရောကျစနစ်ကိုအသုံးပြုပြီး ဥပဒေစိုးမိုးရေး်ထမ်းများက 30% အားဖြင့်ဖြစ်နိုင်ခြေကိုလျှော့ချ။ သို့သျောလညျး, အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းအကြောင်းကိုကျောင်းတွင်မိဘများသို့မဟုတ်လူကြီးများအားဖြင့်စကားပြောခံရသိရသည်တဲ့သူတွေကိုထိတွေ့မှုမြင့်မားလေးသာမှုရှိခဲ့ပါတယ်။ အခြို့သောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလက္ခဏာများလည်းဆက်စပ်ခဲ့ကြသည်။ နှင့်စိတ်ကျရောဂါ / ရုပ်သိမ်းရေး (OR များအတွက် CBCL subscale အပေါ်နယ်စပ်ဒေသသို့မဟုတ်ဆေးခန်းသိသိသာသာအကွာအဝေးအတွင်းသွင်းယူသောသူတို့အား: 1.4; 95% CI: 1.1-1.8:; အော့ဖ်လိုင်းလူ့သားကောင် (2.3-95 1.1% CI 4.8 OR) သတင်းပေးပို့သူကိုလူငယ် ) မလိုချင်တဲ့ထိတွေ့မှုမြင့်မားအန္တရာယ်များရှိခဲ့ပါတယ်။
မလိုချင်တဲ့နှင့် Wanted Exposure ကိုကြိုတင်ခန့်မှန်း Multinomial Logistic Regression (n = 1386)
နှင့်အထီး (OR: 9; 13% CI: 17:; unexposed လူငယ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက, အလိုထိတွေ့မှုအုပ်စုတွင်လူငယ်အသက်အရွယ် (8.8-95 3.8% CI 20.6 OR) ၏အနှစ် 8.6 မှ 95 ဖြစ်လုနီးပါး 5.2 ကြိမ်အဖြစ်ဖွယ်ရှိခဲ့ကြသည် -14.3) (စားပွဲတင် 3) ။ အွန်လိုင်းနှောင့်ယှက်ခဲ့ကြတဲ့သူတွေကို (2.6; 95% CI: OR 1.6-4.4) ပြုသကဲ့သို့:; ပိုမိုမြင့်မားအန္တရာယ် (2.6-95 1.3% CI 5.2 OR) ရှိခဲ့ပုံရိပ်တွေကိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရန်ဖိုင်-sharing အစီအစဉ်များကိုအသုံးပြုတဲ့သူလူငယ်, စျေးဝယ်ခဲ့ကြ မိတ်ဆွေများက '' အိမ်များ (OR မှာအငျတာနကျအသုံးပွုနှင့်အွန်လိုင်း (OR: 3.9;; 95% CI: 2.1-7.1), လိင်အကြောင်းကိုမသိသောလူမျိုးသည်အွန်လိုင်းစကားပြော (2.6-95 OR 1.1% CI 5.8): 1.8; 95 % CI: 1.1-3.0) ။ , filter မှပိတ်ဆို့ဖို့, ဒါမှမဟုတ်သူတို့အများဆုံးမကြာခဏလိုထိတွေ့မှု (OR ၏အန္တရာယ်လျှော့ချခဲ့သည်အသုံးပြုတဲ့ကွန်ပျူတာကိုအင်တာနက်အသုံးပြုမှုကိုစောင့်ကြည့်ရန် (Pop-up ကြော်ငြာသို့မဟုတ် spam များကို e-mail, blockers ထက်အခြား) software ကိုသူလူငယ်: 0.6; 95% CI : 0.4-0.9) ။ အော့ဖ်လိုင်းလူ့သားကောင် (OR: 1.5; 95% CI: 1.013-2.2) စည်းမျဉ်း-ကိုချိုးဖောက်များအတွက် CBCL subscale ပေါ်နှင့်အမှတ်ပေးအဆိုပါနယ်စပ်ဒေသတွင်သို့မဟုတ်ဆေးခန်းသိသိသာသာအကွာအဝေး (OR: 2.5; 95% CI: 1.2-5.4) မြင့်မားနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည် အလိုထိတွေ့မှု၏အန္တရာယ်။ ဒီတွေ့ရှိချက်အရေးပါမှု၏တိုတောင်းသောကျဆင်း (OR ပေမယ့်စိတ်ကျရောဂါများအတွက် CBCL subscale အပေါ်နယ်စပ်ဒေသသို့မဟုတ်ဆေးခန်းသိသိသာသာအကွာအဝေးအတွင်းသွင်းယူသောသူလူငယ်, နှစ်ကြိမ်လိုထိတွေ့မှုအစီရင်ခံရန်ဖြစ်နိုင်ဖွယ်အဖြစ်ထက်ပိုပြီးခဲ့ကြသည်: 2.3; 95% CI: 0.986-5.5; P = .054) ။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, bivariate ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာလိုထိတွေ့မှုနှင့်အတူအခြားအလူငယ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်အုပ်ချုပ်မှုကို-ကိုချိုးဖောက်ပြဿနာများနှင့်အတူသူများသူတို့သည်အခြားလူငယ်၏ 63% နှင့်နှိုင်းယှဉ်ရွယ်တူ (အုပ်ချုပ်မှုကို-အနိုင်အထက်၏ 39% နှင့်အတူအုပ်စုများ၌ကျင်လည်သောအခါညစ်ညမ်းကြည့်ရှုရန် ပို. ခဲ့ကြသည်, ထိုပြသ ; OR: 2.7; 95% CI: 1.3-5.6; P = .006; မပြသဒေတာ) ။
အသက် 10 မှလူငယ်အင်တာနက်အသုံးပြုသူများ 17 ၏လေးဆယ်နှစ်ရာခိုင်နှုန်းကိုအွန်လိုင်းအတိတ်နှစျတှငျညစ်ညမ်း, သာမလိုချင်တဲ့ထိတွေ့မှုအစီရင်ခံသူတို့၏အမျိုးအသုံးပုံနှစ်ပုံကိုမြင်တော်မူ၏။ ဆယ်ကျော်သက်ပိုမိုမြင့်မားအန္တရာယ်များတာပေါ့, ဒါပေမယ့်အထူးသဖြင့်ဆယ်ကျော်သက်ယောက်ျားလေးများစဉ်းစားဆင်ခြင်စရာမလိုချင်တဲ့ထိတွေ့မှု (17- နှင့် 10 နှစ်အရွယ်ယောက်ျားလေးများ၏ 11%) ရှိခဲ့ပါတယ်။ အဘယ်သူမျှမကအခြားလူဦးရေဆိုင်ရာသွင်ပြင်လက္ခဏာများသို့သော် related ခဲ့ကြသည်။ အင်တာနက်ကိုသုံးစွဲခြင်းပမာဏကိုအွန်လိုင်းဆက်စပ်မဟုတ်ခဲ့ခဲ့ဘူးသောအရာကိုလူငယ် 1 ချွင်းချက်နှင့်အတူ, related နှင့်မခံခဲ့ရပါဘူး။ အဆိုပါခြွင်းချက်ပုံရိပ်တွေကိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရန်ဖိုင်ခွဲဝေမှုအစီအစဉ်များကိုအသုံးပြုတဲ့သူလူငယ်မလိုချင်တဲ့ထိတွေ့မှုများအတွက်အန္တရာယ်မှာဖြစ်ကြောင်းရှိ၏ မလိုချင်တဲ့ထိတွေ့မှုနှင့်အတူ 1 လူငယ်၏ ~5 ဤအမှုကိုပြုသောခဲ့သည်။ အမျိုးသားရေးစစ်တမ်းကနေဒီတွေ့ရှိချက်ညစ်ညမ်းမှထိတွေ့မှုပုံရိပ်တွေကိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရန်ဖိုင်-sharing ပရိုဂရမ်ကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သောကြောင်းသည်အခြားအစီရင်ခံစာများအတည်ပြု။6,10 ညစ်ညမ်း၏အကြီးစား volumes ကိုဖိုင်ကိုခွဲဝေမှုမှတဆင့်ကူးစက်နေကြတယ်, တချို့ file-sharing software ကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းများအတွက် filter များ (သို့မဟုတ် filter များထိရောက်မှုရှိပါတယ်) မပါဝင်ပါ။
ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးအားထုတ်မှုနှစ်မျိုးမလိုချင်တဲ့ထိတွေ့မှု၏အနိမ့်အန္တရာယ်များနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်။ ပထမဦးဆုံး, စီစစ်ပိတ်ဆို့, ဒါမှမဟုတ် software ကိုစောင့်ကြည့်ခဲ့သည်။ ဒီဆော့ဗ်ဝဲ filtering နှင့်ပိတ်ဆို့ခြင်းမလိုချင်တဲ့ထိတွေ့မှုအပေါ်တစ်ဦးကျိုးနွံအကာအကွယ်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်အခြားတွေ့ရှိချက်များနှင့်ကိုက်ညီသည်။19 တစ်ဦးကြိုတင်ကာကွယ်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်ဖို့သလိုပဲသောဆော့ဖ်ဝဲကိုပိုပြီး-ပြည့်စုံ software ကိုထိရောက်မှုတို့အတွက်လိုအပ်ကြောင်းအကြံပြုသော Pop-up ကြော်ငြာ blockers နှင့် spam များကို e-mail, filter များအနေဖြင့်ပုံမှန်ဖြစ်ခဲ့သည်။ သို့ရာတွင်ထိုသို့အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းမှမလိုချင်တဲ့ထိတွေ့မှု၏မြင့်မှုနှုန်း filtering နှင့်နေအိမ်အင်တာနက်နှင့်အတူမိသားစုများ၏တစ်ဦးထက်ပိုထက်ဝက်အားဖြင့် software ကိုပိတ်ဆို့ခြင်းများအသုံးပြုခြင်းရှိနေသော်လည်းဖြစ်ပွားခဲ့သည်ကြောင်းအလေးပေးဖို့လည်းအရေးကြီးပါတယ်။14 ဤသည် filtering နှင့်တစ်ဦးတည်းဆော့ဖျဝဲပိတ်ဆို့ခြင်းမလိုချင်တဲ့ထိတွေ့မှုနှင့်အခြားချဉ်းကပ်မှုဆန့်ကျင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်နေတဲ့အဆင့်မြင့်အဘို့အပေါ်မှီခိုမရနိုင်သည်ကိုအကြံပြုလိုအပ်နေပါသည်။
အင်တာနက်ကိုဘေးကင်းလုံခြုံမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီးဥပဒေတင်ဆက်မှုတက်ရောက်ခြင်းလည်းမလိုချင်တဲ့ထိတွေ့မှု၏လျော့ချလေးသာမှုနှင့်အတူဆက်စပ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ နှောင်းပိုင်း 1990s ကတည်းကလူငယ်အင်တာနက်လုံခြုံမှုကိုသတင်းအချက်အလက်များကိုအချို့သောဥပဒေစိုးမိုးရေးအေဂျင်စီများအကြားတစ်ဦးကြိုးပမ်းရှိခဲ့သည်နှင့်တိကျသောအစီအစဉ်များသည်ဤရည်ရွယ်ချက်အဘို့တီထွင်ခဲ့ကြသည်။36,37 တချို့ကဥပဒေစိုးမိုးရေးအစီအစဉ်များအတွက်ကြောင့်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးရဲ့ကွန်ပျူတာပေါ်မှာရနိုင်ပုံကို, ညစ်ညမ်းအွန်လိုင်းစျေးကွက်ဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လိုတိကျတဲ့သတင်းအချက်အလက်များကိုပေးစွမ်းနှင့်မည်သို့ရှောင်ရှားရန်သို့မဟုတ်ဖယ်ရှားပစ်ရန်။37 လူငယ်ပိုပြီးအာရုံစိုက်သို့မဟုတ်ဥပဒေစိုးမိုးရေး်ထမ်းများကထောက်ပံ့ပေးသတင်းအချက်အလက်ပိုမိုအလေးချိန်ပေးနိုငျသညျ။ ထိုကဲ့သို့သောမလိုချင်တဲ့ထိတွေ့မှုအဖြစ်ပြဿနာတစ်ခုရည်ရွယ်သည့်အခါဒါ့အပြင်ရိုးရှင်းသောတင်ပြချက်များခက်ခဲ-to-ပြောင်းလဲမှုလူငယ်ဝိသေသလက္ခဏာများသို့မဟုတ်အပြုအမူတစ်ခု outgrowth မကျမည်အကြောင်းအရာ, အထူးသဖြင့်ထိရောက်သောဖြစ်နိုင်သည်။ သို့သော်သူတို့ကအွန်လိုင်းညစ်ညမ်းအကြောင်းကိုကျောင်းတွင်မိဘများသို့မဟုတ်လူကြီးများအားဖြင့်စကားပြောခဲ့ကြသည်ဟုလူငယ်ထိတွေ့မှုမြင့်မားလေးသာမှုရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒီတွေ့ရှိချက်အဘို့တစ်ခုမှာရှင်းပြချက်မိဘများနှင့်လူငယ်အကြားအများအပြားပြောဆိုမှုများမလိုချင်တဲ့ထိတွေ့မှု၏အဖြစ်အပျက်များပြီးနောက်ဖြစ်ပျက်သောကွောငျ့ဖွစျသညျ။
ငါတို့သည်လည်းအချို့သောလူငယ်မလိုချင်တဲ့ထိတွေ့မှုပိုမိုအားနည်းချက်ဖြစ်သလိုပဲကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ မလိုချင်တဲ့ထိတွေ့မှုနှင့်အော့ဖ်လိုင်းလူ့သားကောင်နှင့်နယ်စပ်ဒေသသို့မဟုတ်ဆေးခန်းသိသိသာသာစိတ်ကျရောဂါများအကြားအသင်းအဖွဲ့များရှိခဲ့သည်။ ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက်အွန်လိုင်းနှောင့်ယှက်သို့မဟုတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတောင်းနိုင်အောင်နှင့်အော့ဖ်လိုင်းလူ့သားကောင်နှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိန်ခေါ်မှုအကြားအသင်းအဖွဲ့များဖေါ်ပြခြင်းယခင်ရလဒ်များသည်ဆင်တူသည်။38 ထိုကဲ့သို့သော Impulse သို့မဟုတ်ညှိတရားသဖြင့်စီရင်အဖြစ်တချို့ကဘုံအခြေခံအင်္ဂါရပ်များ, ဤအသင်းအဖွဲ့များကိုရှင်းပြလိမ့်မည်။ ဥပမာအားဖြင့်, ထကြွလွယ်သောလူငယ်ဆင်းရဲသောသူသည်တရားသဖြင့်စီရင်သို့မဟုတ်မလိုချင်တဲ့အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းရှောင်ရှားရန်သို့မဟုတ်ကာကွယ်တားဆီးရေးအချက်အလက်များ၏အသုံးပြုမှုကိုအောင်လျော့နည်းနိုင်စွမ်းရှိလိမ့်မည်။ စီးပွားပျက်ကပ်အလားတူအကြောင်းပြချက်တွေများအတွက်အန္တရာယ်မှာအချို့သောလူငယ်အင်တာနက်အသုံးပြုသူများထားနိုငျသညျ။
ဒါဟာသို့သော်မလိုချင်တဲ့ထိတွေ့မှုနှင့်ဝိသေသလက္ခဏာများထိုကဲ့သို့သောအော့ဖ်လိုင်းလူ့သားကောင်အဖြစ်သို့မဟုတ်စိတ်ကျရောဂါများအကြားဆက်ဆံရေး overstate ဖို့မအရေးကြီးပါသည်။ ဤရွေ့ကားအသင်းအဖွဲ့များအားကြီးသောကြဘူး။ ငါတို့အထွေထွေလူဦးရေနမူနာဖြစ်ခဲ့သည်များနှင့်မလိုလားအပ်သောထိတွေ့မှုနှင့်အတူပါဆုံးလူငယ်သားကောင်သို့မဟုတ်စိတ်ကျရောဂါမခံခဲ့ရပါ။ ယေဘုယျတွေ့ရှိချက်အများကြီးမလိုအပ်သောထိတွေ့မှုပုံမှန်အင်တာနက်ကိုအသုံးပြုခြင်းသည်ကနေပေါ်ပေါက်ခြင်းနှင့်, ဖိုင်-sharing အစီအစဉ်များနှင့်အတူပုံရိပ်တွေဒေါင်းလုပ် မှလွဲ. အန္တရာယ်တိုးမြှင့်ကြောင်းတိကျသောအပြုအမူသို့မဟုတ်ဝိသေသလက္ခဏာများမှပြင်းပြင်းထန်ထန် related မဟုတ်ကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။
ဒါဟာအားလုံးမဟုတ်မလိုချင်တဲ့ထိတွေ့မှုဖြစ်စဉ်များရည်ရွယ်တဲ့ဖြစ်ကြောင်းမှတ်သားဖို့လည်းအရေးကြီးပါတယ်။ ဖြစ်ရပ်များ 21% မှာတော့လူငယ်သူတို့က်ဘ်ဆိုက်များသို့ ဝင်. မတိုင်မီက်ဘ်ဆိုက်များတွင် X-rated ခဲ့ကြသည်ကိုသိကဆိုသည်။14 ဤရွေ့ကားဖြစ်စဉ်များမလိုချင်တဲ့ထိတွေ့မှု၏အခြားသာဓကအနေဖြင့်မဟုတ်ရင်သိသာစွာကွဲပြားကြဘူး။ တချို့ကလူငယ်သိချင်စိတ်နေဖြင့်လှုံ့ဆော်ခြင်းနှင့်ပင်လုံးဝမရည်ရွယ်တဲ့ဖြစ်ကြောင်းဖြစ်စဉ်များအတွက်ခဲ့ကြလိမ့်မယ်, သိချင်စိတ်အချို့ကိုဒီဂရီပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့ကြပေလိမ့်မည်။ ဒါ့အပြင်အရှိဆုံးလူငယ်သူတို့မြင်ပုံရိပ်တွေကိုအားဖြင့်ကမောက်ကမမခံခဲ့ရပါ။14 အတော်များများကလူငယ်အတန်ငယ်ထိုကဲ့သို့သောရုပ်မြင်သံကြား, မဂ္ဂဇင်းများနဲ့ R-rated ဇာတ်ကားအဖြစ်ကြောင့်အခြားအရင်းမြစ်များမှထိတွေ့မှု၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်တွေမှ inured နိုင်ပါသည်။
အလိုထိတွေ့မှုနှင့်အတူလူငယ်၏အကြီးအများစုဆယ်ကျော်သက်ယောက်ျားလေးများ ရှိ. , လိုထိတွေ့မှု၏နှုန်းထားများအသက်အရွယ်နှင့်အတူတိုးတက်လာခဲ့သည်။ အသက် 38 နှစ်အထီးအင်တာနက်အသုံးပြုသူ 16 ၏သုံးပုံတစ်ပုံ (17%) ထက်ပိုအတိတ်နှစျတှငျရည်ရွယ်ချက်အပေါ် X-rated က်ဘ်ဆိုက်များသွားရောက်လည်ပတ်ခဲ့သည်။ လိင်စိတ်ဝင်စားမှုဒီအသက်အရွယ်အုပ်စုတွင်မြင့်မားသည်နှင့်ထိတွေ့မှုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသိချင်စိတ်များစွာသည်အခြားပုံစံတစ်မျိုးအဖြစ်ရှုမြင်ခံရနိုင်သည့်လိင်အကြောင်းမသိသောလူတို့နှင့်အတူအွန်လိုင်းပြောနေတာနဲ့ဆက်စပ်ခဲ့သည်စေချင်ကြောင်းအံ့သြစရာမဟုတ်ခဲ့ပေ။
မလိုချင်တဲ့ထိတွေ့လိုပဲလိုချင်ထိတွေ့မှုပုံရိပ်တွေကိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရန်ဖိုင်-sharing အစီအစဉ်များကို အသုံးပြု. နှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်။ မိတ်ဆွေများက '' နေအိမ်များမှာအင်တာနက်ကိုအသုံးပြုခဲ့သောသူလူငယ်လည်းလိုထိတွေ့မှုမြင့်မားအန္တရာယ်ရှိခဲ့ပါတယ်။ မိတ်ဆွေများက '' နေအိမ်များမှာအင်တာနက်ကို အသုံးပြု. အားလုံးအတွက်သို့မဟုတ်အုပ်စုများအတွက်သုံးပြီးအဓိပ်ပာယျဆိုရငျလိုထိတွေ့မှုနှင့်အတူလူငယ်၏ 44% ကိုသူတို့ရသောအခါသူတို့ရည်ရွယ်ချက်အပေါ် X-rated က်ဘ်ဆိုက်များမှထွက်သွားဆိုပါတယ်သောကွောငျ့, သို့ဖြစ်လျှင်ဤအခြို့သောလူငယ်များအကြားကစားမှာပါအုပ်စုတစ်စုပြောင်းလဲနေသောရောင်ပြန်ဟပ်စေခြင်းငှါ, "သူငယ်ချင်းများကိုသို့မဟုတ်အခြားကလေးတွေနှင့်အတူ။ " ခဲ့ကြသည်14 ကျနော်တို့လည်း filtering ကိုတွေ့ရှိခဲ့နှင့် software ပိတ်ဆို့ခြင်း, Pop-up ကြော်ငြာနှင့် spam များကို e-mail, blockers ထက်အခြား, လိုထိတွေ့မှု၏အလေးသာလျှော့ချ။
ဆိုးသွမ်းသဘောထားတွေထားရှိခြင်းသည်လိုထိတွေ့မှုအတွက်အချက်တစ်ချက်ဖြစ်သလိုပဲ။ အဆိုပါ CBCL အုပ်ချုပ်မှုကို-ခြိုးဖောကျ subscale အပေါ်နယ်စပ်ဒေသသို့မဟုတ်ဆေးခန်းသိသာထင်ရှားသောအဆင့်မှာသွင်းယူတဲ့သူလူငယ်ထက်ပိုနှစ်ကြိမ်လိုချင်ထိတွေ့မှုအစီရင်ခံရန်ဖြစ်နိုင်ဖွယ်ကဲ့သို့ဖြစ်ကြ၏။ တဦးတည်းဖြစ်နိုင်သမျှရှင်းပြချက်အုပ်ချုပ်မှုကို-ကြေကွဲအပြုအမူနှင့်အာရုံခံစားမှုရှာတစ်ခုနောက်ခံသဘောထားကိုအကြား link တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။15,39-41 အလိုထိတွေ့မှုနှင့်စိတ်ကျရောဂါများအကြားတစ်ဦးကဖြစ်နိုင်သမျှအသင်းအဖွဲ့ကြောင့်တချို့စိတ်ဓာတ်လူငယ် dysphoria သက်သာရာတစ်ဦးနည်းလမ်းများအဖြစ်အွန်လိုင်းညစ်ညမ်း၏ arousal ရှာအလားတူရှင်းပြချက်ရှိသည်နိုင်ဘူး။42-44 အလိုထိတွေ့မှုနှင့်စိတ်ကျရောဂါများအကြားအသင်းအဖွဲ့အရေးပါမှု၏တိုတောင်းသောကျဆင်းသော်လည်း, OR တစ်ဦးဖြစ်နိုင်သမျှဆက်ဆံရေးမျိုးညွှန်ပြ။
ဒါဟာအလိုထိတွေ့မှုနှင့်သက်ငယ်ပြစ်မှုသို့မဟုတ်စိတ်ကျရောဂါများအကြားအသင်းအဖွဲ့များ overstate ဖို့မလည်းအရေးကြီးပါသည်။ ဆယ်ကျော်သက်ယောက်ျားလေးများကြားတွင်လိင်သိချင်စိတ်ကပုံမှန်ဖြစ်ပြီး, အများအပြားက X-rated က်ဘ်ဆိုက်များသို့သွားရောက်ခြင်းကြီးထွားသင့်လျော်သောအပြုအမူကြောင်းပြောပါလိမ့်မယ်။ သို့သော်အချို့သုတေသီများလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့် ပတ်သက်. လက်ခံထားသောလူမှုရေးတန်ဖိုးများနှင့်သဘောထားများ၏ undermining, အစောပိုင်းကနှင့်ကရာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှု, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ deviancy, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမှားယွင်းစေခြင်းနှင့်လိင် compulsive အပါအဝင်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ကာလအတွင်းအွန်လိုင်းညစ်ညမ်းထိတွေ့အနုတ်လက္ခဏာအကျိုးဆက်များအမျိုးမျိုးဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြစေခြင်းငှါစိုးရိမ်ကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့ကြ အပြုအမူ။2-4,6,8,9,44
ဒါဟာအဘယ်သူမျှမအားဖွငျ့အှနျလိုငျးညစ်ညမ်းလူငယ်သို့မဟုတ်အရွယ်ရောက်ကြည့်ရှုတွင်ဤပြဿနာများကိုမဆိုဘို့တစ်ခလုတ်အဖြစ်ပြုမူမြဲမြံစွာတည်သည်။ သို့သော်အချို့လူငယ်ကြည့်ရှုကြားတွင် deviant လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျိုးစီးပွားသို့မဟုတ်ဖောက်ပြန်တဲ့မြှင့်တင်ရန်နိုင်လျှင်, ဆိုးသွမ်းသဘောထားတွေနဲ့အတူလူငယ်အင်တာနက်အသုံးပြုသူများ၏အဖွဲ့ခွဲထိုကဲ့သို့သောဆုံးအားနည်းချက်လူငယ်ပါဝင်သည်နိုင် ဆိုးကျိုးများ, လူငယ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဖောက်ပြန်တဲ့သူနှင့် antisocial အပြုအမူအကြားအသင်းအဖွဲ့ပေးတော်မူ၏။45 ဒါ့အပြင်အချို့သုတေသီများစိတ်ကျရောဂါနှင့်အွန်လိုင်းလိင် compulsive အပြုအမူအကြားဆက်ဆံရေးကိုတွေ့ပြီ။42-44 ဤသည်မှာစိတ်ဓာတ်လူငယ်အင်တာနက်အသုံးပြုသူများ၏အုပ်စုသာမန်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးမှုနှောင့်အယှက်သို့မဟုတ်နေ့စဉ်တာဝန်ဝတ္တရားတွေ့ဆုံရန်နှင့်ရွယ်တူချင်းအတူကျန်းမာဆက်ဆံရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့သူတို့ရဲ့စွမ်းရည်ကိုအယှက်နိုင်သည့်အွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ compulsive, ဖွံ့ဖြိုးဆဲများအတွက်အန္တရာယ်မှာဖြစ်စေခြင်းငှါအဘယ်သူသည်အချို့သောဆံ့နိုင်ကြောင်းအကြံပြုထားသည်။
အများဆုံးထိုကဲ့သို့သောထိတွေ့မှုမလိုအပ်သောဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုမအဖြစ်လူငယ်အင်တာနက်အသုံးပြုသူများတန်ရာအကြားအွန်လိုင်းညစ်ညမ်းမှထိတွေ့မှု၏မြင့်မှုနှုန်းကိုပိုမိုအာရုံစူးစိုက်။ အင်တာနက်ကိုအသုံးပြုခြင်းသည်လူငယ်များအကြားကျယ်ပြန့်ဖြစ်လာခဲ့သည့်အခါစစ်တမ်းများ, နှောင်းပိုင်း 1990s ကတည်းကမလိုချင်တဲ့ထိတွေ့မှုမြင့်မားမှုနှုန်းတွေ့ပြီ။6,14,17-19,21 အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းမှထိတွေ့မှုကြောင့်လူငယ်အင်တာနက်အသုံးပြုသူများအထူးသဖြင့်ဆယ်ကျော်သက်ယောက်ျားလေးများကြားတွင်စံတန်ဖိုးအဖြစ်သွင်ပြင်လက္ခဏာနိုင်ပါတယ်တဲ့အချက်ရောက်ရှိကြပေလိမ့်မည်။ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဆရာ, ဆရာ, ဆရာမများ, အခြားလူငယ်လုပ်သားများနှင့်မိဘများအများအပြားမိန်းကလေးငယ်များလုပ်ပေးအဖြစ်အင်တာနက်အသုံးပြုခဲ့သူအထက်တန်းကျောင်းအသက်အရွယ်အများစုယောက်ျားလေးများ, အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းမှထိတွေ့မှုအချို့ကိုဒီဂရီရှိသည်ယူဆသငျ့သညျ။ တဦးတည်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းဆိုလိုပညာရှင်များဒီခေါင်းစဉ်ကနေဝေးရှက်မနေသင့်သောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ ဖရန့်ကိုတိုက်ရိုက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအပေါ်ညစ်ညမ်းရဲ့ဖြစ်နိုင်ချေလွှမ်းမိုးမှုဖြေရှင်းရန်ကြောင်းလူငယ်နှင့်အတူစကားဝိုင်း, sex အကြောင်းသဘောထားများနှင့်ဆက်ဆံရေးလိုအပ်နေပါသည်။
အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းတာထိတွေ့မှု၏မလိုချင်တဲ့ရှုထောင့်အပေါ်တစ်ဦးကအာရုံလည်းလိုအပ်ပါသည်။ ဥပဒေရေးရာညစ်ညမ်းမှအရွယ်ရောက်ပြီးသူမိမိဆန္ဒအလျောက်ဝင်ရောက်ခွင့်ကန့်သတ်အပေါ်ကွဲပြားအမြင်များရှိနေသော်လည်း, ငါတို့လူငယ်, စောင့်ရှောက်မှု၏တစ်ဦး modicum သုံးပြီးသူတို့မြင်ချင်ကြဘူးညစ်ညမ်းဖြတ်ပြီးလာမယ့်စရာမလိုဘဲအင်တာနက်ကိုသုံးစွဲဖို့တတ်နိုင်ဖြစ်သင့်တဲ့သဘောတူညီမှုရှိကွောငျးထင်ပါတယ်။ ဒီအွန်လိုင်းညစ်ညမ်းစျေးကွက်မှရန်လိုခြင်းနှင့်လှည့်ဖြားနည်းဗျူဟာ၏အသုံးပြုမှုကိုကန့်သတ်မယ့်နည်းလမ်းတွေရှာဖွေတာလိုအပ်သည်။ ငါတို့သည်လည်း Internet filtering ကိုအောင်နည်းပညာကုမ္ပဏီများတိုက်တွန်းဖို့လိုပါတယ်လွယ်ကူပိတ်ဆို့ခြင်း, ပိုမိုစနစ်များသို့ built နှင့်တစ်ဦးချင်းပဏာမခြေလှမ်း, Technological ကျွမ်းကျင်မှုများနှင့်ဘဏ္ဍာရေးအရင်းအမြစ်များအပေါ်လျော့နည်းမှီခိုနှင့် filtering ကို၏အသုံးပြုမှုကိုမြှင့်တင်ရန်နှင့်ကလေးများနှင့်အတူအိမ်ထောင်စုအတွက် software များပိတ်ဆို့ခြင်း။ ထို့အပြင်တှငျကြှနျုပျတို့အွန်လိုင်းဖြန့်ဝေနေသည်နှင့်ဆန့်ကျင်သူတို့ကိုယ်သူတို့ကာကွယ်ဖို့အတွက်သူတို့ကိုကူညီဖို့ဘယ်လိုမလိုချင်တဲ့ညစ်ညမ်း၏နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုအကြောင်းကိုလူငယ်ပညာပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
အတိုင်းအတာများအွန်လိုင်းညစ်ညမ်းထိတွေ့လူငယ်လွှမ်းမိုးစေခြင်းငှါရှိမရှိနှင့်ဘယ်လိုအသံသည်ပင်ကိုယ်မူလသုတေသနနိုင်ရန်အတွက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းမှလူငယ်တုံ့ပြန်မှုအထူးသဖြင့်အသက်ကြီးလူငယ်များအကြား, ကွဲပြားခြားနားခြင်းနှင့်ရှုပ်ထွေးသောဖြစ်ကြောင်းတချို့သက်သေအထောက်အထားရှိပါတယ်,7 အများအပြားဆယ်ကျော်သက်သူတို့မြင်ပုံရိပ်တွေများ၏ content မှ thoughtfully နှင့်ပြင်းထန်စွာတုနျ့ပွနျနိုငျသညျ။ သို့သော်ညစ်ညမ်းကြည့်ရှု၏လူငယ်အပေါ်သက်ရောက်မှုအကြောင်းကိုအနည်းငယ်သာသုတေသနရှိခဲ့သည်, တစ်ခုခုကိုလိုချင်သို့မဟုတ်ပို relevantly, မလိုချင်တဲ့။ အဲဒီမှာရှိမရှိအပေါ်အလင်းတှရေဲ့အဓိပ်ပာမသုတေသနလုပ်ငန်းဘယ်လိုဖြစ်တယ်, ဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးမှာအောက်မှာညစ်ညမ်းမှမလိုချင်တဲ့ထိတွေ့လူငယ်အတွက်ဆိုးရွားသောတုံ့ပြန်မှုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ ရှင်းနေသည်မှာထိတွေ့မှု၏အတိုင်းအတာဆိုးရွားသောသက်ရောက်မှုလူငယ်ကသာသေးငယ်တဲ့အစိတ်အပိုင်းများအတွက်ပေါ်ပေါက်လျှင်ပင်, အကြွင်းမဲ့အာဏာအသုံးအနှုန်းများအတွက်နံပါတ်များကိုမျှမျှတတကြီးမားသောဖြစ်နိုင်ပါတယ်, ထိုလုံလောက်စွာကြီးလှ၏။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဖှံ့ဖွိုးတိုး၏လယ်ပြင်တွင်သုတေသီများအစောပိုင်းညစ်ညမ်းမှလူငယ်၏ထိတွေ့မှုဒါမှမဟုတ်ဘာထိုကဲ့သို့သောထိတွေ့မှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများစိုးရိမ်, စံတန်ဖိုးစံချိန်စံညွှန်းများ, ဒါမှမဟုတ်တချို့လူငယ်အတွက် arousal ၏ပုံစံများပေါ်ပါလိမ့်မယ်ဆက်စပ်သောအရေးကြီးသော "အရေးပိုသက်ရောက်မှု" ရှိပါတယ်ရှိမရှိမသိရပါဘူး။1,2
ဒီလေ့လာမှုကပြသထားတယ်ကြောင့်လူငယ်သတင်းပေးထံမှအထိခိုက်မခံသည့်အကြောင်းအရာများအပေါ်ဒေတာစုဆောင်းဖို့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်လူငယ်များ၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးအပေါ်သက်ရောက်မှုရှိမရှိနှင့်အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းကြည့်ရှုသောအရာကိုအခြေအနေများနှင့် ပတ်သက်. သုတေသနများအပြင်ကျနော်တို့ထိုကဲ့သို့သောမိသားစုသဘောထားတွေ, စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ attribute တွေ, ပုံစံများနှင့်ညစ်ညမ်း၏အကြောင်းအရာအဖြစ်အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းမှလူငယ်တုံ့ပြန်မှုကိုသြဇာလွှမ်းမိုးနိုင်သည့်အချက်များ, အကြောင်းသတင်းအချက်အလက်မလိုအပ် , လူငယ်များအကြားအုပ်စုသည်ဒိုင်းနမစ်၏သက်ရောက်မှုများနှင့်အလိုထိတွေ့မှု (သို့မဟုတ်အပြန်အလှန်) ကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါသည်မလိုချင်တဲ့အဘယျသို့အခွအေနထိတွေ့မှုရှိမရှိများနှင့်အောက်တွင်။
လူငယ်နှင့်အင်တာနက်အကြောင်းကိုသုတေသနတစ်ဦးအတော်လေးသစ်ကိုခံဝန်ဖြစ်ပါတယ်။ စုံစမ်းရေးကော်မရှင်အဘို့အလုပျထုံးလုပျနညျးစံရကြပြီမဟုတ်နှင့်အစီအမံအတည်ပြုကြပြီမဟုတ်။ ညစ်ညမ်းမှထိတွေ့မှု၏ခေါင်းစဉ်တစ်ခုတရားစွဲဆိုတစ်ဦးဖြစ်ပြီး, သိသိသာသာတုံ့ပြန်မှုအတွက် Subject ပမာဏအဖြစ် nonresponse ၏ဖြစ်နိုင်ခြေနှင့်လင်းမှုမရှိတုံ့ပြန်မှုများအတွက်အခန်းတစ်ခန်းရှိပါတယ်။ သူတို့ထိုကဲ့သို့သောပစ္စည်းထွက်ရှာသောဝန်ခံဖို့ရှက်သောကြောင့်ဥပမာအားဖြင့်, အချို့သောလူငယ်မလိုချင်တဲ့အဖြစ်ထိတွေ့မှုဖြစ်စဉ်များသွင်ပြင်လက္ခဏာရှိသည်ဟုပေလိမ့်မည်။ အဆိုပါလေ့လာမှုပြုလုပ်လိုထိတွေ့မှုဖြစ်စဉ်များနှင့် ပတ်သက်. စည်းဝေးရာသို့ရောက်သည့်ကန့်သတ်သတင်းအချက်အလက်အားဖြင့်လည်းမလွယ်ကူဖြစ်ပါတယ်။ ထို့အပြင်အချို့သောလူငယ်ငြင်းဆိုခဲ့သည်သို့မဟုတ်ပါဝင်ခွင့်ပိတ်ပင်ထားခဲ့သည်, မိမိတို့ပါဝင်ရလဒ်ကိုပြောင်းလဲနိုင်တယ်။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နံပါတ်များကိုသာခန့်မှန်းဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, နမူနာပုံမှန်မဟုတ်သောဖြစ်နိုင်သည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဓိကတွေ့ရှိချက်များအများစုသည်, စာရင်းအင်းနည်းစနစ်ခန့်မှန်းချက်ဒီတစ်ခုနှင့်တူ 2.5 95 ၏နမူနာများအတွက်စစ်မှန်တဲ့လူဦးရေရာခိုင်နှုန်း၏≤100% အတွင်းရှိကြ၏ကြောင်းအကြံပြု, ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခန့်မှန်းဝေးတဲ့ချွတ် 2.5% ထက်ဖြစ်ကြောင်းသေးငယ်တဲ့အခွင့်အလမ်းလည်းမရှိ။
ဒီလေ့လာမှုကအွန်လိုင်းလူငယ်အင်တာနက်အသုံးပြုသူများအကြားညစ်ညမ်းခြင်းနှင့်ထိုကဲ့သို့သောထိတွေ့မှုများ၏အများစုမလိုချင်တဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုမှထိတွေ့မှု၏မြင့်မှုနှုန်းအတည်ပြု။ မလိုချင်တဲ့နှင့်ထိတွေ့မှုမဟုတ်ဘဲငယ်ရွယ်သောကလေးများထက်ဆယ်ကျော်သက်အကြားအာရုံစိုက်နေသည်လိုချင်နှစ်ဦးစလုံး။ နှောင့်ယှက်ခြင်းသို့မဟုတ်အင်တာနက်ကနေတဆင့်မလိုလားအပ်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမြှူဆွယ်တောင်းခံခံယူကြသူလူငယ်, အော့ဖ်လိုင်းလူ့သားကောင်ကိုတွေ့ကြုံခံစားခြင်း, စိတ်ဓာတ်ကျနေသောသူတို့ကိုအထူးသဖြင့်အခက်အခဲမလိုချင်တဲ့ထိတွေ့ရှောင်ရှားရှိစေခြင်းငှါသောသူတို့အား။ စိတ်ဓာတ်ကျနေကြသည်သို့မဟုတ်ဆိုးသွမ်းသဘောထားတွေကိုသူလူငယ်လိုထိတွေ့မှုမဆိုအနုတ်လက္ခဏာသက်ရောက်မှုပိုမိုအားနည်းချက်ဖြစ်နိုင်သည်ကြောင့်, သက်ရောက်မှုနှင့်ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးအသစ်ချဉ်းကပ်မှုအကြောင်းကိုသုတေသနပြုမျက်ခြေမပြတ်နေကြသည်။
လက်ခံ စက်တင်ဘာလ 28, 2006 ။
Janie Wolak, JD, ကလေးများသုတေသနစင်တာကိုဆန့်ကျင်ပြစ်မှု, New Hampshire တက္ကသိုလ် 10 အနောက် Edge ဒေါက်တာ, Durham, နယူးဟမ်းရှား 03824 လိပ်စာစာပေးစာယူ။ E-mail ကို: [အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်]
ပြည်သူ့ဥပဒေ 507-104 (ထို Stevens ပြင်ဆင်ချက်) ၏ပုဒ်မ 208 လိုက်နာရန်ကျနော်တို့ Juvenile တရားရေးရုံးကနေထောက်ပံ့ကြေး 100-MC-CX-K2005 မှတဆင့်, ဒီသုတေသနလုပ်ငန်းများအတွက်ရန်ပုံငွေ 024% ဖက်ဒရယ်ရင်းမြစ်များမှဆင်းသက်လာခဲ့စာဖတ်သူများအကြံပေး နှင့်သက်ငယ်ပြစ်မှုကာကွယ်တားဆီးရေး, တရားမျှတမှုအမေရိကန်ဦးစီးဌာနနှင့်အမိမြေလုံခြုံရေး, အမေရိကန် Secret Service များဦးစီးဌာနအနေဖြင့် HSCEOP-05-P-00346 ပေးရန်။ ပါဝင်ပတ်သက်ဖက်ဒရယ်ရန်ပုံငွေစုစုပေါင်းငွေပမာဏ $ 348 767 ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဤဆောင်းပါး၌အမြင်သို့မဟုတ်ထင်မြင်ယူဆ၏ရမှတ်စာရေးသူ၏ရှိသူများဖြစ်ကြပြီးသေချာပေါက်တရားဝင်အနေအထားသို့မဟုတ်အမေရိကန်တရားရေးဦးစီးဌာနသို့မဟုတ်အမိမြေလုံခြုံရေးဌာန၏မူဝါဒများကိုယ်စားပြုကြပါဘူး။
CBCL-ကလေးအပြုအမူစစ်ဆေးရမဲ့စာရင်း • OR-လေးသာမှုအချိုးအစား • CI-ယုံကြည်မှုကြားကာလ
Escobar-Chaves S က, Tortolero S က, Markham ကို C, အနိမျ့ B, Eitel P ကို, မီဒီယာ၏ Thickstun P. သက်ရောက်မှုဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသဘောထားများနှင့်အပြုအမူပေါ်မှာ။ ကလေးအထူးကု။2005;116 :303- 326
ငွေရတတ်သောသူအမ်လိင်မျက်နှာပြင်: မီဒီယာထိတွေ့မှုနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများ၏အကြပ်အတည်း။ ကလေးအထူးကု။2005;116 :329- 331
Kanuga M က, Rosenfeld WD ။ ဆယ်ကျော်သက်လိင်နှင့်အင်တာနက်: ကောင်းမွန်သော, ဆိုးများနှင့် URL ကို။ J ကိုကလေးမြီးကောင်ပေါက် Gynecol ။2004;17 :117- 124
လိင်ဆီသို့မြီးကောင်ပေါက် 'နှင့်ငယ်ရွယ်အရွယ်ရောက်' 'သဘောထားအပေါ် erotica ဖို့ထိန်းအကွပ်မရှိသောလက်လှမ်း၏ Zillmann ဃသြဇာလွှမ်းမိုးမှု။ J ကိုမြီးကောင်ပေါက်ကနျြးမာရေး။2000;27 :41- 44
ကင်မရွန် K ကို Salazar L ကို, Bernhardt J ကို, Web ပေါ်ရှိလိင်နှင့်အတူ DiClemente R. ပြုစုပျိုးထောင်ခြင်း '' အတွေ့အကြုံကို Burgess-Whitman N ကို, Wingood, G: အွန်လိုင်းအာရုံစိုက်အုပ်စုများကနေရလဒ်တွေကို။ J ကိုမြီးကောင်ပေါက်။2005;28 :535- 540
Greenfield pm တွင်။ အင်တာနက်ပေါ်ရှိညစ်ညမ်းမှအမှတ်တမဲ့ထိတွေ့: ကလေးသူငယ်ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်မိသားစုများအတွက် peer-to-peer file-sharing ကွန်ရက်ဆိုလို။ Apple က Dev မှ Psychol ။2004;25 :741- 750
Cantor J ကို, Mare ML, Hyde JS ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမီဒီယာအကြောင်းအရာထိတွေ့မှု၏ Autobiographical အမှတ်တရများ။ မီဒီယာ Psychol ။2003;5 :1- 31
Freeman က-Longo RE ။ သားသမီးတို့, ဆယ်ကျော်သက်များနှင့်အင်တာနက်ပေါ်ရှိလိင်။ လိင်စွဲ Compuls ။2000;7 :75- 90
Thornburgh D ကို, လင်း H ကို, eds ။ လူငယ်, ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံ, နှင့်အင်တာနက်။ ဝါရှင်တန်ဒီစီ: အမျိုးသားအကယ်ဒမီစာနယ်ဇင်း; 2002
Koontz ld ။ မျှဝေခြင်း Programs ကို File: ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံသုံးစွဲနည်း peer-to-peer ကွန်ယက်၏အသုံးပြုမှု။ ဝါရှင်တန်ဒီစီ: အမေရိကန်အစိုးရခံမှုရုံး;2005။ GAO-05-634 တိုင်ကြားရန်
ကလေးသူငယ်အွန်လိုင်းကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအပေါ်ကော်မရှင်။ ကလေးသူငယ်အွန်လိုင်းကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး (COPA) ရက်နေ့တွင်ကော်မရှင်: ကွန်ဂရက်မှအစီရင်ခံစာ။ ဝါရှင်တန်ဒီစီ: အမေရိကန်အစိုးရပုံနှိပ်ရုံး; 2000
အမေရိကန်ပြည်တွင်းစစ်လွတ်လပ်ရေးပြည်ထောင်စု et al v Ashcroft, ရှေ့နေချုပ်,။ 542 အမေရိကန် 656 (အမေရိကန်တရားရုံးချုပ်က 2004)
အမေရိကန်ပြည်တွင်းစစ်လွတ်လပ်ရေးပြည်ထောင်စု et al v Ashcroft, ရှေ့နေချုပ်,။ 535 အမေရိကန် 564 (အမေရိကန်တရားရုံးချုပ်က, 2002)
Wolak J ကို, Mitchell ကငွေကျပ်, Finkelhor ဃ အွန်လိုင်းသားကောင်များ:5နှစ်များနောက်ပိုင်း။ လက်ဇန္ဒြီးယား, VA သို့: ပျောက်ဆုံးနှင့်စားမှုများကလေးများများအတွက်အမျိုးသားရေးစင်တာ;2006။ ထုတ်ဝေ 07-06-025
ပတေရုသ J ကို, Valkenburg pm တွင်။ အင်တာနက်ပေါ်ရှိလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းမှဆယ်ကျော်သက် '' ထိတွေ့မှု။ Community Res ။2006;33 :178- 204
Ybarra ML, Mitchell က KJ ။ ကလေးများနှင့်ဆယ်ကျော်သက်အကြားအင်တာနက်ကညစ်ညမ်းထိတွေ့: တစ်အမျိုးသားရေးစစ်တမ်း။ Cyberpsychol ပြုမူနေ။2005;8 :473- 486
Livingstone က S, Bober အမ် ဗြိတိန်ကလေးများ Go ကိုအွန်လိုင်း: အလူငယျမြား၏အတွေ့အကြုံများနှင့်သူတို့၏မိဘများလေ့လာ။ လန်ဒန်, ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း: စီးပွားရေးနှင့်နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ၏လန်ဒန်ကျောင်း, 2004
ရေလွှမ်းမိုးခြင်းက M, Hamilton က C. သြစတြေးလျမှာရှိတဲ့လူငယ်နှင့်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံ: Exposure နှင့်ဖြစ်နိုင်ချေအကျိုးသက်ရောက်မှုများ၏အကျိုးသက်ရောက်ခြင်းအပေါ်အထောက်အထား။ ကင်ဘာရာ, သြစတြေးလျ: အဆိုပါသြစတြေးလျအင်စတီကျု, 2003
Mitchell က KJ, Finkelhor: D, Wolak ဂျေအင်တာနက်ပေါ်ရှိမလိုချင်တဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းမှလူငယ်၏ထိတွေ့: အန္တရာယ်, သက်ရောက်မှုနှင့်ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးတစ်အမျိုးသားရေးစစ်တမ်း။ လူငယ် Soc ။2003;34 :330- 358
Rideout V. မျိုးဆက် Rx.com: ဘယ်လိုလူငယျမြားကနျြးမာရေးပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနကအင်တာနက်ကိုသုံးပါ။ ဝါရှင်တန်ဒီစီ: ဟင်နရီဂျေခိုင်ဆာမိသားစုဖောင်ဒေးရှင်းက; 2001
Finkelhor: D, Mitchell က KJ, Wolak ဂျေ အွန်လိုင်းသားကောင်များ: အနိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့လူငယ်အပေါ်တစ်ဦးအစီရင်ခံစာ။ ဝါရှင်တန်ဒီစီ: ပျောက်ဆုံးနှင့်စားမှုများကလေးများများအတွက်အမျိုးသားရေးစင်တာ; 2000
Mitchell က KJ, Wolak J ကို, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမြှူဆွယ်တောင်းခံ, နှောင့်ယှက်ခြင်းနှင့်အင်တာနက်ပေါ်ရှိညစ်ညမ်းမှမလိုချင်တဲ့ထိတွေ့မှု၏လူငယ်အစီရင်ခံစာများတွင် Finkelhor ဃ Trends ။ J ကိုမြီးကောင်ပေါက်ကနျြးမာရေး။ စာနယ်ဇင်းများတွင်
Lenhart တစ်ဦးက, က Madden M က, Hitlin P. ဆယ်ကျော်သက်နှင့်နည်းပညာ: လူငယ်တစ်ဦးအပြည့်အဝက Wired နှင့်မိုဘိုင်း Nation ဖို့ေူပာင်းလဲရေးဦးစီးနေ။ ဝါရှင်တန်ဒီစီ: Pew Internet နှင့်အမေရိကန်ဘဝကစီမံကိန်း; 2005
Fox ကအက်စ်ဒစ်ဂျစ်တယ်ကွဲပြားခြင်း။ : မှာရရှိနိုင် www.pewinternet.org/pdfs/PIP_Digital_Divisions_Oct_5_2005.pdf။ ဝင်ရောက်အောက်တိုဘာလ 25, 2005
ဒစ်ဂျစ်တယ်နာဂတျအတှကျတောင်ပိုင်းကယ်လီဖိုးနီးယား Annenberg School တွင်စင်တာတက္ကသိုလ်။ ဆယ်ပါးနှစ်များ, ဆယ်ပါး Trends: တစ်နှစ်တာ 4, 2004:ဒစ်ဂျစ်တယ်အနာဂတ်အစီရင်ခံစာ: ဒစ်ဂျစ်တယ်အနာဂတ်လေ့လာ။ Los Angeles မြို့,, CA: တောင်ပိုင်းကယ်လီဖိုးနီးယားတက္ကသိုလ်မှ; 2004
Horrigan JB ။ မူလစာမျက်နှာဘရော့ဘန်းကလေးမွေးစား 2006 ။ : မှာရရှိနိုင် www.pewinternet.org/PPF/r/184/report_display.asp။ ဝင်ရောက်မေလ 28, 2006
Lenhart တစ်ဦးက, Horrigan J ကို, မြေလွတ်ဃအကြောင်းအရာဖန်တီးမှုအွန်လိုင်း။ : မှာရရှိနိုင် www.pewinternet.org/PPF/r/113/report_display.asp။ ဝင်ရောက်ဖေဖော်ဝါရီလ 28, 2004
မိုးရာသီအယ်လ်တယ်လို့ Pew ကအင်တာနက် Project မှဒေတာများမှတ်စုတို: ဘျ၏အသုံးပြုခြင်း။ : မှာရရှိနိုင် www.pewinternet.org/pdfs/PIP_webcam_use.pdf။ ဝင်ရောက်ဇွန်လ 12, 2006
Ybarra ML, Mitchell က KJ, Wolak J ကို, Finkelhor ဃဝိသေသလက္ခဏာများဆန်းစစ်ပါနှင့်အင်တာနက်နှောင့်ယှက်ဆက်စပ်သောဆက်စပ်ဒုက္ခဆင်းရဲ: ဒုတိယလူငယ်ကအင်တာနက်လုံခြုံမှုစစ်တမ်းကနေတွေ့ရှိချက်။ ကလေးအထူးကု။2006;118 (4) ။ : မှာရရှိနိုင် www.pediatrics.org/cgi/content/full/118/4/e1169
အမေရိကန်သန်းခေါင်စာရင်းဗျူရို။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသန်းခေါင်စာရင်း 2000။ ဝါရှင်တန်ဒီစီ: အမေရိကန်သန်းခေါင်စာရင်းဗျူရို; 2005
ပြည်သူ့ထင်မြင်ချက်သုတေသနများအတွက်အမေရိကန်အသင်းက။ စံအဓိပ္ပာယ်: စစ်တမ်းများအဘို့ဖြစ်ရပ်မှန်ကုဒ်များနှင့်ရလဒ်နှုန်း၏နောက်ဆုံးသဘောထား။ 3rd ed ။ Lenexa, KS: ပြည်သူ့ထင်မြင်ချက်သုတေသနများအတွက်အမေရိကန်အစည်းအရုံး; 2004
Curtin R ကို, Presser S က, တယ်လီဖုန်းစစ်တမ်း nonresponse အတွက်အဆိုတော်အီးအပြောင်းအလဲများအတိတ်လေးပုံတစ်ပုံရာစုကျော်။ ပြည်သူ့ Opin ဆိုးကျိုး2005;69 :87- 98
Pew သုတေသနပြည်သူ့အဘို့အရေးစင်တာနှင့်နှိပ်ပါ။ ရွေးကောက်ပွဲကြီးထွားလာ Resistance ရင်ဆိုင်ရနိုင်ကားတိုင်ကိုယ်စားလှယ်။ ဝါရှင်တန်ဒီစီ, Pew သုတေသနပြည်သူ့အဘို့အရေးစင်တာနှင့်စာနယ်ဇင်း; 2004 ။ ထုတ်ဝေ 4-20-2004
Achenbach TM အလိုအလျောက်။ လူငယ်ကိုယ်ပိုင်အစီရင်ခံစာနှင့် 1991 ကိုယ်ရေးဖိုင်များအတွက်လက်စွဲစာအုပ်။ ဘာလင်တန်, VT: စိတ်ရောဂါကုသမှု, ဗားမောင့်တက္ကသိုလ်ဦးစီးဌာန,1991
Hosmer DW, Lemeshow အက်စ် အသုံးချ Logistic Regression။ ed 2nd ။ နယူးယောက်, NY: ယော Wiley; 2000
Medaris M က, Girouard C. ဆိုက်ဘာစပေ့ထဲမှာကလေးများကာကွယ်ခြင်း: အဆိုပါ ICAC Task Force အစီအစဉ်။ ဝါရှင်တန်ဒီစီ: Juvenile တရားရေးရုံးနှင့်သက်ငယ်ပြစ်မှုကာကွယ်တားဆီးရေး; 2002
Netsmartz အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ။ အင်တာနက်ပေါ်ရှိဘေးကင်းလေးတွေနှင့်ဆယ်ကျော်သက် Keeping ။ : မှာရရှိနိုင် www.netsmartz.org။ ဝင်ရောက်ဇွန်လ 12, 2006
Ybarra ML, Mitchell က KJ ။ အွန်လိုင်းနှောင့်ယှက်မြားတှငျပါဝငျခွငျးလူငယ်: စောင့်ရှောက်သူများကလေးဆက်ဆံရေးနှင့်အတူအသင်းအဖွဲ့, အင်တာနက်အသုံးပြုခြင်းနှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဝိသေသလက္ခဏာများ။ J ကိုမြီးကောင်ပေါက်။2004;27 :319- 336
မာတင်, CA, et al ကယ်လီ TH, Rayens MK ။ Sensation ရှာကြံနှင့်နှောင့်အယှက်ရောဂါလက္ခဏာတွေ: အစောပိုင်းနှင့်နှစ်လယ်ပိုင်းတွင်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အတွက်နီကိုတင်း, အရက်နှင့်ဆေးခြောက်သုံးစွဲခြင်းနှင့်အတူအသင်းအဖွဲ့။ Psychol ကိုယ်စားလှယ်။2004;94 :1075- 1082
Moore က SM, Rosenthal DA ။ Venturesomeness, Impulse, နှင့်အထက်မြီးကောင်ပေါက်အကြားအန္တရာယ်များအပြုအမူ။ အမြင် Mot ကျွမ်းကျင်မှု။1993;76 :98
Zuckerman အမ် Sensation ရှာကြံ: အန္တရာယ်နှင့်ဆုလာဘ်များအကြားချိန်ခွင်လျှာ။ ခုနှစ်တွင်: Lipsitt LP သို့ Mitnick ll, eds ။ self-စည်းမျဉ်းအပြုအမူနှင့်အန္တရာယ်ယူ: အကြောင်းရင်းများနှင့်အကျိုးဆက်များ။ Norwood, NJ: Ablex ထုတ်ဝေရေး; 1991: 143-152
Cooper ကတစ်ဦး, Delmonico DL, Griffin-Shelley အီး, Mathis RM ။ အွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှု: အလားအလာပြဿနာအပြုအမူတွေတစ်ခုစာမေးပွဲ။ လိင်စွဲ Compuls ။2004;11 :129- 143
Black က DW, Belsare, G, Schlosser အက်စ်လက်တွေ့ features တွေ, စိတ်ရောဂါ comorbidity နှင့် compulsive ကွန်ပျူတာအသုံးပြုမှုအပြုအမူသတင်းပို့ပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်အသက်တာ၏ကျန်းမာရေး-related အရည်အသွေးကို။ J ကို Clin စိတ်ရောဂါကုသမှု။1999;60 :839- 844
Cooper ကတစ်ဦး, Putnam DE, Planchon LA က, Boies SC ။ အွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ compulsive: အကျော့ကွင်း၌ညိတွယ်တဲ့။ လိင်စွဲ Compuls ။1999;6 :79- 104
Righthand S က, Welch C. လိင်ပြစ်မှုကျူးလွန်သူဖူးသူကားအဘယ်သူ Juvenile: အ Professional ကစာပေ၏တစ်ဦးကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း။ ဝါရှင်တန်ဒီစီ: Juvenile တရားရေးရုံးနှင့်သက်ငယ်ပြစ်မှုကာကွယ်တားဆီးရေး; 2001
ကလေးအထူးကု အွန်လိုင်းထုတ်ဝေ ဖေဖေါ်ဝါရီလ 27, 2007
ကလေးများ၏အင်တာနက်အသုံးပြုမှုကိုမိဘ၏ကန့်သတ်တားမြစ်ထားသောကြားဝင်ဖြန်ဖြေခြင်း - ဘာအတွက်နှင့်မည်သူ့အတွက်ထိရောက်သနည်း။ မီဒီယာသစ်လူ့အဖွဲ့အစည်း 2012; 0:2012 1461444812452412v1-1461444812452412
အင်တာနက်ကိုလိင်စွဲ: ကိလေသာစိတ်လိုင်စင်? Adv ။ Psychiatric ။ ဆက်ဆံပါ။ 2012; 18:4 270-277
ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံအကဲခတ်: ကျားကွာခြားချက်များ, အကြမ်းဖက်မှုနှင့်သားကောင်။ အီတလီနိုင်ငံရှိစူးစမ်းလေ့လာရေးလေ့လာ အမျိုးသမီးများအပေါ်အကြမ်းဖက်မှုဆိုင်ရာ 2011; 17:10 1313-1326
ဆယ်ကျော်သက် contraceptives ပြန်ကြားရေးသူတို့၏သတင်းရင်းမြစ်များအပေါ်စဉျးစားကွညျ့ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်သုတေသနဂျာနယ် 2011; 26:4 423-446
အွန်လိုင်းသားကောင်များ၏လိင်အတွေ့အကြုံများအကဲဖြတ်: ပုံမှန်လုပ်ဆောင်ချက်သီအိုရီကိုသုံးပြီးဆယ်ကျော်သက်အရွယ်အွန်လိုင်းအပြုအမူတစ်ခုကစာမေးပွဲ ပြစ်မှုဆိုင်ရာတရားမျှတရေးကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း 2010; 35:4 412-437
လိင်, စျေးကြီးများနှင့်မီဒီယာ ကလေးအထူးကု 2010; 126:3 576-582
ဆယ်ကျော်သက်များ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရှင်းလင်းပြတ်သားသောအင်တာနက်ပစ္စည်းများကိုအသုံးပြုခြင်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုအခြေခံသည့်လုပ်ငန်းစဉ်များ - ရူပဗေဒသရုပ်မှန်၏အခန်းကဏ္ The ဆက်သွယ်ရေးသုတေသန 2010; 37:3 375-399
ကလေးများနှင့်ပြုစုပျိုးထောင်ခြင်းအပေါ်မီဒီယာများ၏ကျန်းမာရေးအကျိုးသက်ရောက်မှု ကလေးအထူးကု 2010; 125:4 756-767
ဆယ်ကျော်သက်များ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအရတိကျမှန်ကန်သောအင်တာနက်အကြောင်းအရာ၊ လိင်ဆိုင်ရာမသေချာမရေရာမှုနှင့်သဘောထားများမကျူးလွန်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစူးစမ်းလေ့လာမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ထိတွေ့မှု - ချိတ်ဆက်မှုရှိသလား။ ဆက်သွယ်ရေးသုတေသန 2008; 35:5 579-601